वैकल्पिक फिड बीएसएफ Maggot खेती • Yurie बीएसएफ
बिना खरीद फिड
माग्गा माछा र कुखुराको लागि एक वैकल्पिक फिड हो।
तपाईंको पशुधन कारोबार सुनिश्चित गर्न जारी छ।
छर्राहरू खरिद गर्न बोझ बिना
आधुनिक बीएसएफ मागग रंच को स्थान बिना Smell
तपाईंको शहरमा सबैभन्दा नजिकको स्थान जान्न चाहनुहुन्छ?
कसरी: स्वचालित रूपमा प्रणाली द्वारा पत्ता लगाइएको तपाईंको स्थान पोष्ट कोडहरूको संख्याको पङ्क्तिद्वारा संकेत गरिएको छ।
त्यसैले केवल खोजीमा क्लिक गर्नुहोस्।
यदि तपाईं थप सटीक स्थान चाहानुहुन्छ भने कृपया खाली स्तम्भ भर्नुहोला शहर / गाँउ टाइप गर्नुहोस् जहाँ तपाईं अहिले हुनुहुन्छ।
सस्तो उत्पादन लागत
कालो सैनिक मल लार्वाको उत्पादन धेरै सजिलो छ र सस्तो, हामी कचरा, कचौरा र खालका प्रयोग गर्न सक्छौं।
पूर्ण पोषण सामग्री, अमीनो एसिड र उच्च प्रोटीनले स्वस्थ जनावरहरूलाई पनीरको विकास बढाउँछ।
सबैभन्दा ठूलो चलन फूलहरू SMELL को बिना, निःशुल्क डाउनलोड सुरक्षित र आरामदायक छ। सुरक्षित समुदाय सामुदायिक प्रदर्शनमा छैन र किसानहरूको लागि सुअवसरशील छ।
आधुनिक बीएसएफ माग्गोट बिना बाउ माछा र कुखुराको चाराको लागि चुम्बन उत्पादन गर्ने उद्देश्य छ।
दाहिने चुम्बनको खेती गर्नु नराम्रो, बिना मेशिन, ड्रग्स बिना वा किण्वन बिना त्यसैले परिणाम अधिकतम हुन सक्छ।
सुरक्षित किनभने यो परिवार द्वारा प्रदर्शन र यसलाई बाहिर लैजानुपर्छ।
Maggots खेती जारी राख्नुहोस्
मागग फसलहरु संसाधित गर्न सकिन्छ र Maggot पेस्ट, आटा चुम्बन र चुम्बन छर्रों मा प्रयोग गरिन्छ वा प्रत्यक्ष (ताजा म्यागोट)
यस तरिकाले भण्डारबाट फिड खरिद नगरी तपाईं धेरै जनावरहरू पाउन सक्नुहुन्छ।
अलविदा छर्राहरू र पसल पसल।
Maggot अनुप्रयोग जारी राख्नुहोस्
Maggot मार्केटिंग? YURIE बीएसएफ गर्न राम्रो !!!
तपाईलाई मगग मार्केटिंग को बारे मा उलझन को आवश्यकता छैन।
किनभने Yurie BSF यो खरीद गर्नेछ।
Maggot मार्केटिंग संग जारी राख्नुहोस
Yurie BSF ले Rp100.000.000 लाई सर्वश्रेष्ठ विकास सहयोग / व्यवसाय विकासको लागि ब्यक्ति प्रदान गरेको छ।
सहायता कोष लाई बढावा दिन को लागी सहायता को लागी।
फ्लोरिडाहरु संग म्याग्दी को भुगतान - फिर्ता नहीं रिबायो!
व्यापार अवसर जारी राख्नुहोस्
तपाईं पनि हुनेछैनौं।
AMBASSADOR YURIE BSF तपाईंको खेतमा उपस्थित हुन तयार छ।
AMBASSADOR Yurie BSF 100 शहरहरु भन्दा अधिक उपस्थित छ व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान गर्न को लागि आफ्नो सम्बन्धित खेतों मा।
99 स्थान जाँच गर्नुहोस्
YURIE बीएसएफ यूनिभर्सिटीमा तपाईलाई उन्नत प्रशिक्षण दिइनेछ।
बीएसएफ खेती को बिना गंध बिना SOP (मानक परिचालन प्रक्रिया) अनुसार आधुनिक बीएसएफ खेती सुनिश्चित गर्न को लागी।
Yurie बीएसएफ विश्वविद्यालय जारी छ
Yurie BSF को एक मित्र को रूपमा, तपाईं स्वचालित रूपमा KOPERASI मगगोट इन्डोनेशियाको सदस्य बन्नुहुनेछ।
मगग खरीद र बिक्री र अन्य व्यापारिक विकासको लागि आधिकारिक कन्टेनर।
इन्डोनेसियाली मगगट सहकारी व्यवसायको शेष आय साझेदारी गर्न तपाईंले लाभ उठाउनुहुनेछ।
इंडोनेशियाई मगगट सहकारी को जारी राख्नुहोस
युगगो व्यवसायलाई संयुक्त रूपमा कृषि व्यवसायको संसारमा विकसित गर्न Yurie BSF समुदायको एक अंश बन्नुहोस्।
यस चरणले घरेलू र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको माग पूरा गर्न सक्षम छ।
Agroindustry जारी राख्नुहोस्
यो सीएसआर कार्यक्रम उनका लागि होईन जो सिक्न चाहानुहुन्छ, तर गन्ध बिना कुनै बीएसएफ खेतीको प्याकेजलाई बर्दाश्त गर्न सक्दैन
CSR जारी राख्नुहोस्
परमेश्वरको साथ सबै दिन सार्न अनिवार्य प्रार्थना संग दैनिक गतिविधिहरू सुरू गर्नुहोस्।
त्यसैले यो Yurie बीएसएफ कार्यक्रम सबै काम कार्यक्रमों मा मुख्य र NUMBER एक हो।
प्रार्थना जारी राख्नुहोस्
Maggot Ranch को 99 स्थान जाँच गर्नुहोस्
किन ब्रिस्टरहरू युरै बीएसएफलाई प्रेम गर्छन्
गन्ध बिना म्याग्रेट खेती गर्ने कार्यक्रमलाई सफलतापूर्वक परीक्षण गरिएको कार्यक्रमको साथ धेरै सजिलो छ।
दिइएको दिशानिर्देश साँच्चै मेरो सफलताको लागि थियो, मेरो म्यागेट व्यवसायको फसल उत्पादनलाई समायोजन गरी
मलाई मार्गदर्शन गर्न Mbak Yurie धैर्य असाधारण, अफिसमा व्यस्त छ किनकी पर्यवेक्षक सुपर मर्मत हो।
बिना बो रन्च बिना Maggot को 99 स्थान जाँच गर्नुहोस्
स्थान जाँच गर्नुहोस्
यदि तपाई एक शुरुआती उत्पादन लागत हो भने विशेष गरी फिडले 99% सम्म पुग्न सक्छ।
पोल्ट्रीको लागि 82% सम्मको लागि लागत बचतको आनन्द लिनुहोस्। तपाईले यो मगगोट सामाग्रीको साथ आफ्नो पोल्ट्री फिड बनाएर काम गर्नुहुन्छ, जस्तै मगगोट आटा जस्ता पोल्ट्रीको वृद्धि अधिक भन्दा अधिक छ। यो पैसा बचत गर्न समय र तपाईंको पशुहरूको संख्या बढाउन जारी राख्नुको समय
कुनै पनि अध्ययन गर्नुहोस्
बोस बिना विशेष रूपमा बीएसएफको खेतीको लागि मोबाइल भिडियो ट्यूटोरियल हेर्नुहोस्।
कसरी प्लेस्टोरमा Yurie BSF अनुप्रयोग डाउनलोड गर्न।
कसरी Maggot प्रक्रिया गर्न जारी राख्नुहोस्
कसरी प्रक्रिया गर्ने डाउनलोड गर्नुहोस्
पशु फिडको लागि मगगोट
माछा र कुखुरा फिडको रूपमा दिइनु भन्दा पहिले बीएसएफ चुम्बनबाट अधिकतम नतिजा प्राप्त गर्न, हामी सिफारिस गर्दछौं कि तपाइँले यसलाई यसमा प्रक्रिया गर्दछ:
ताजा / लाइभ जागाहरू
जानवरको खानाको लागि मगगट कसरी प्रसोधन गर्ने
निर्दोष चुम्बन खेती गर्न सिक्न छिटो तरिका।
सफलता को बाधाओं को एक पूछने को शर्म हो, Yurie BSF विशेष ग्राहक सेवा प्रदान गर्दछ, मगग व्यापार को बारे मा चीजहरुको जवाब र चुम्बन को लागि प्रौद्योगिकी प्रविधी।
अहिले पनि कल गर्नुहोस्
सबैजना मक्खी जान्दछन्। यी कीराहरू हाम्रो वरपर हुन्। तिनीहरू आउँछन् किनभने तिनीहरू खाना गंधको स्रोत गन्छन्। यी कष्टप्रद मक्खनहरूको अलावा, तिनीहरू तपेदिक (तपेदिक), डिसेंरीरीमाबुबा, कोलेरा र विभिन्न अन्य रोगहरु जस्तै महामारीहरु को महामारी ले पनि गर्छन।
मानिसहरु द्वारा मक्खन द्वारा भरी खाने को माध्यम ले यस रोग फैलिएको छ। तर वास्तवमा मक्खनले मानिसहरूलाई पनि धेरै फाइदा ल्याउँछ।
मक्खन एक प्रकारको कीट हो (उप-अर्डर चक्रलक्राग्रा डेटेरिया अर्डर), मार्क्सलोजिमी मक्खियोंसँग कम एन्टेना छन्, पखेटाको दुई जोडीहरू अर्थात् विङ सापसाङङ र एउटा जोडाको सानो प्वाइज जसले उडान गर्दा ब्यालेन्स कायम राख्छ।
रोग क्यारियर मक्खन
मसाले किन रोग फैलिएको कीरा भनिन्छ? किनकी जब मक्खियों गंदे स्थान मा उतरते हो, तब 125.000 को बारे मा, जीवाणुहरु लाई छोड दिए जाएगा जहां उनि भूमि।
यो स्वाभाविक रूप देखि मक्खाइहरु को खाने को अनूठा तरिका को कारण हुन्छ। जब तिनीहरू खानामा उडाउँछन्, मक्खन खाने सुरु गर्नु अघि आफ्नो मुखबाट द्रव जारी गर्नेछ।
एंजाइमको रूपमा द्रव प्रकार्यहरूले खानाको पाचनलाई सुधार्न मद्दत गर्दछ। यो उल्टी तरल खानामा छोडिन्छ र मानव द्वारा खाएको बेलामा विभिन्न रोगहरूको सामना गर्न सकिन्छ।
मक्खनको बारेमा महत्त्वपूर्ण कुराहरू
मक्खन घर आइपुग्छ किनकी उनि खाना स्रोतहरु गंध गर्छन। यसलाई छुटकारा पाउन, एक कंटेनरमा खाना राख्नुहोस् जहाँ मक्खी बस्न सक्दैन।
खाना पत्ता लगाउन, मक्खी दिन दिन सक्रिय हुन्छ। यसको प्रकारको आधारमा फ्लाइ 75-126 अन्डा र 1-4 दिन भित्र हिचको बीचमा उत्पादन गर्न सकिन्छ।
जैविक रूप देखि,5मिनेट बायोलॉजिकल को कमी हुनेछ, र यदि यो मानव द्वारा खाएको छ, यो दस्त र यति को कारण हुनेछ।
उडान जीवन चक्र भिन्न हुन्छ,5भित्र 30 दिन। बीएसएफ एक दिन 5-8 को वरिपरी धेरै छिटो उड्छ र प्रत्यक्ष हरी मक्खन एक दिन 30 सम्म पुग्छ।
घर उक्ल प्रति घण्टा XNXX किलोमिटरको गतिमा उड्न सक्दछ, यो हामीले कचौरा वा खाना किनेका कारणले गर्दा चाँडै हटाइनेछ।
विशेष गरी वातावरणमा जहाँ फ्लाइट कोलोनहरू प्रजातिहरु लाई प्रजनन गर्दछ।
मानिसहरूको लागि मक्खन को लाभ
मक्खनबाट प्रयोग गरिन्छ उनीहरूको सन्तान हो, प्राय: मार्वा वा म्यागागट वा म्यागोट वा जगेडा वा म्याग्दी वा चौंरीको वा उल्टो-इगेट भनिन्छ।
केही देशहरूमा बालबालिकाहरू म्यान्सद्वारा उपभोगको लागि बेच्ने गरिन्छ। तिनीहरूले पास्ता, सूप र पिज्जा जस्ता विशेष मेनू प्रदान गर्छन्।
दबाइको संसारमा, बालबालिकाको मक्खन, अर्थात् मगगोट वा लार्वा वा म्यागेट वा यूगेट-यूसेट, बाह्य रोगहरूको लागि प्रायः "म्याग्गोट थेरेपी" भनिन्छ।
जहाँ लार्वा घाँटीको छेउमा छाला र क्यान्सर घाँटीको मासु खाएको छ जुन संक्रमित हुन्छ, ब्याक्टेरियालाई मार्ने र मृत छाला खाएको हुन्छ। दबाइको लागि सजिलो बनाउन सजिलो बनाउन।
मगोटले अक्सर हत्या गरेर विभिन्न हत्याका घटनाहरू मार्न खोजेको छ।
अर्को लाभ यो हो कि रिफिलिन जीन को सामग्री प्रायः कम्पनीहरु को चिपकने वाला को रूप मा प्रयोग गरिन्छ। यसको चिपकने वाला शक्ति र लचकता रबड रूख sap को भन्दा धेरै बलियो छ।
रेफिल्लिन जीन पनि धमनी तंत्रिका र मीना को विभिन्न रोगहरु को उपचार गर्न सक्छन्। जहाँ दुई तंत्रिकाले अक्सर मस्तिष्कमा रगत र ओक्सीजनको प्रवाह रोक्छ।
पार्थवुडहरू र जीवाणुहरूको अलावा, म्याग्गोटहरूमा वागजिक अपशिष्ट डिकोस्पेसर, परिवारको अपशिष्ट, कारखानाको बर्खास्त, मानव अपशिष्ट, पशुपालिकाको खाँचो, शंकु र अन्य कार्बनिक सामग्रीहरू पनि छन्।
इन्डोनेसियामा धेरै व्यक्तिहरूले लिने अर्को लाभ यो लार्वा माछा र कुखुराको लागि प्राकृतिक र वैकल्पिक फिडमा प्रशोधन गर्दै।
सामान्यतः मगगट पहिले मगग पास्ता, मगग छर्रों, म्यागागट आटा, ताजा म्याग्दी, क्रिसपिग म्याग्गोट, सुत्ने चुम्बन, मगग स्टिक, फ्रोजन चुम्बन, म्याग्गोट ओवन र यति मा प्रशोधन गरिएको छ।
यो चुम्बन तयारताहरू प्रत्यक्ष रूपमा पशुहरूलाई दिइन्छ वा माछा, कुखुरा र रेश्तरी फिडको लागि आपूर्तिको रूपमा भण्डारण गरिन्छ।
प्राकृतिक पशु फिडको लागि माग्गेटको उपयोग र यस विकल्पले गर्दा म्याग्गोट पोषक तत्वहरूमा धनी हुन्छ, पूर्ण अमीनो एसिड र प्रोटीनमा उच्च हुन्छ। प्रोटीन समाहित दायराहरू 40-56% बाट।
अनातोमी र जीवविज्ञान
मक्खनका विभिन्न शरीर आकार। केहि स्लिम, मोटो, ठूला र सानो उनको प्रकार को आधार मा।
सामान्यतया तिनीहरूसँग राम्रो गति छ कि वायु गतिमा अनुकूल गर्न।
मकईको टाउकोमा ठूलो यौगिक आँखाहरू हुन्छन् जुन दिशाहरूमा र हेड, एन्टेना, ओसेल, मुखको दायाँ। अनुहार टाउको सँगसँगै सार्न सक्छ।
मक्खनहरूसँग न्यूरोन्सहरू छन् जुन आन्दोलनका लागि संवेदनशील हुन्छन् र वरपरको गतिको बारेमा दृश्यको दिशा नियन्त्रण गर्न उपकरणको रूपमा पनि।
त्यसो कि यो उजुरी को आंदोलन को लागी संवेदनशील छ, वस्तु को आकृति को पहिचान गर्न को लागि एक पल्ट बदलन र रोलिंग।कुनै पनि मक्ख प्रजातिहरु दाँत छ।
मक्खन द्वारा के खरिद गरिन्छ साना साना अन्न (पराग) र तरल भोजन हो। ठोस खानाको रूपमा तिनीहरूले यसलाई खान सक्दैनन्।
तर केही प्रकारका ट्याबानिडाका मक्खनहरू उनीहरूको मुखमा चिनो पार गर्न र उनीहरूको रगतलाई चिसो बनाउँछन्।
प्रकार्य पखेटाहरू समात्न र दोस्रो भागमा उडानको मांसपेशी छ। खण्ड एक र तीन साना छन्। तेस्रो खण्डमा थोरै फ्याँकिएको बेला थोरै डम्बबेलको रूपमा छ।
एकै दिशामा आफ्नो स्थिति अनुहारलाई पिटेर वा मट गर्दा, पुरुष उचाइको स्थिति महिला निकाय भन्दा माथि छ।
संगतको स्थिति पछि धेरै समय पछि फर्केर फर्किएन। गर्भवती महिला फ्लाइट आमाबाबुले अण्डा राख्न को लागी नजिकै वा खाना माथि ठाँउ खोज्नेछन्।
बीएसएफफ फ्लाइट (हर्मेटिअनिया इफुसेन) को प्रकार को बाहेक जो अण्डा को अन्डा खाना देखि माथि नहीं बल्कि भोजन को स्रोत को चारै ओर।
सामान्यतया खोजी गर्ने स्थान भनेको छ कि धेरै खाने स्रोतहरू मार्ला खानाको रूपमा लार्वामा छ।
फ्लाई अण्डा सामान्यतया घडीको बिचमा हल्लाउनेछ जब बीएसएफबाट थोडा फरक हुन्छ जुन अण्डा हान्च सम्म सम्म 2-4 दिन चाहिन्छ।
फलफूल मक्खन (ड्रोसोफिला प्रजातिहरू)
मासु मक्खियों (sarcophagidae)
हरियो मक्खी (कलफेरो भोमटारिया)
घोडा मक्खन (परिवार ट्याब्यादाई)
अपशिष्ट मक्खन (मनोविदाइ)
बालुवा मक्खी (स्पाइरिभरपे लुनुलाटा)
गृह-आधारित मक्खियों (मस्का डोनेस्टिका)
बीएसएफ फ्लाइज (हिटमिडिया बेलुकी)
फलफूल मक्खन किसानहरूलाई कात्तिक हो किनभने तिनीहरू फलफूल गर्छन्। यो उडान नपुग्न धेरै सजिलो छ किनभने भोजन प्रचुर मात्रामा बिरुवामा उपलब्ध छ र यसको लागि इन्डोनेसियाली जलवायु उपयुक्त छ।
बरसातको सिजनमा यी मक्खनहरू धेरै प्रजनन हुन्छन्।
फलफूल मक्खनहरूको लक्षण
3 मिमी उडान लम्बाई
शरीरको रङ पहेँलो र खैरो छ
उज्ज्वल रातो आँखा छ
एक फाँसिङ पेट धीरज गर्दा उडान गर्नुहोस्
फ्लोट गर्न सकिन्छ
अण्डा एक चन्द्रमा चन्द्र जस्तो आकारको हुन्छ
अण्डा छाला वा दोषी चोटहरू वा फल अन्तर्गत समूहहरूमा राखिएको छ
अण्डको संख्या अनाजमा 15 को बारेमा हो
अण्डा दुई दिन पछि हल्लाए
5 मिमी पाइप लम्बाई
पेटमा3ट्रांसवर्स लाइन छ
महिला उडानले अधिक संकेत दिएको छ
पुरुष पेट अधिक गोल हुन्छ
जीवन चक्रले 16 दिन सम्म पुग्छ।
6-9 दिनहरू बीच फल मा लाइभ लार्वा
वयस्क मक्खी 2-9 हप्ताको लागि प्रत्यक्ष
यो एक उडान अन्य को तुलनामा अलग र अद्वितीय छ। माछा मक्खनहरू ओभोभाइभेटेरस हुन्, त्यो भनेको घाँटी, माटो, माछाहरू, कार्बनिक पदार्थको क्यान्सर आदि को लागी राख्नु हुन्छ मगगोट अण्डा छैन।
मासु मक्खनहरूको लक्षण
महिला मासुको मक्खन लार्वभरा हुन्
6-14 mm को लम्बाई घोडा उड्छ
एक हल्का खैरो छाती गुफा छ
यसमा3अन्धकार रेखाहरू पृष्ठीय थोरैक्समा विस्तारित छन्
हल्का खैरो पेट गर्नुहोस्
माछा फ्ली लाइफ साइकल
14-30 दिन उडान उमेर
प्रत्येक पल्ट पहिलो instar 40-80 लार्वा को बीच spawns
त्यहाँ धेरै प्रकारका हरी मक्खहरू छन्, सामान्यतया मध्यम र ठूलो। त्यहाँ काँचको पेट, चमकदार चाँदी, हरियो र खैरो हुन्छ।
विभिन्न माछाको माछाहरू वा सडेका मासु वा जनावर मलहरूमा नस्ल वा खानाको बर्बाद खारेज गर्दछ।
हरियो फ्लाइहरू असाधारण क्षमताहरू छन्, उनीहरूले ब्याक्टेरिया र जीवाणुहरूलाई खानेकुरामा राख्नुको लागि मात्र एक सेकेन्ड चाहिन्छ।
हरित मक्खनहरूको लक्षण
वयस्क हरियो उडान 1 /4"-1 / 12" इन्चको लम्बाइ
ग्लास रङ पेट, चमकदार चांदी, हरियो र खैरो
3 /4ठूलो वयस्क लार्वा इन्च
हरियो मक्खी अन्डाले 8-18 घण्टा हट्नेछ
सडेका मासु वा माछाको माछा, वा पशुधन खाडी, वा खाना बर्बादमा प्रत्यक्ष। गैर-रोकाउने महिला मक्खन जो बढेको पशु वजन घटाने को कारण हुन्। काटिएको धेरै पीडा छ।
घोडाको मक्खनका विशेषताहरू
वयस्क घोडा उडानको लम्बाइ 25mm हो
उनको आँखा हरी वा कालो हो
पुरुष मक्खनका आँखाहरू एकअर्कासँग छन्
एक महिला उडानको आँखा टाढा छन्
घोडा फ्लाई लाइभ साइकल
एकपटक अँध्यारोमा 100-1.000 वस्तुहरू राख्नुहुन्छ
घोडा फ्लाइ अण्डाहरू 5-7 दिनहरू बीच हट्नेछ
वयस्क घोडा मक्खनको जीवन चक्र 30-60 दिनको बीच हो
अपशिष्ट मक्खन वा निपटान मक्खन वा मठ मक्छ। लार्वा को मिट्टी को रूप मा कार्बनिक अपशिष्ट मन पर्छ।
अपशिष्ट मक्खनहरूको लक्षण
2 मिमी फ्लाई लम्बाई
कपाल देखि भरी पंखहरू
अण्डा एक दिन 1-6 हट्नेछ
1-3 पप चरण दिन
त्यहाँ दुई प्रकारका बालुवा झण्डाहरू छन्:
यो उडान खतरनाक छ किनकि यसले जनावर र मानवहरूलाई चित्रण गर्दछ जुन यसले खुट्टा र विभिन्न रोगहरू उत्पन्न गर्न सक्छ। उच्च बुखार जस्तै।
तटस्थ, मंगोवर जंगली वन, वनहरू र भैंसी खेतहरू वरिपरि तिनीहरूको आवास। यो उडान प्रजातिहरू रातमा सक्रिय छ 9-4 बिहान बिहान।
बालुवाको प्रकार काट्दै
फिलबोटोमोस (लेशिमनिया परजीवी वेक्टर)
लुट्जोमिया (लेशिमनिया परजीवी वेक्टर)
बालुवाको मक्खनको लक्षण
उहाँको शरीर तुलसी भएको छ
पहेंलो र पहेंलो खैरो
कालो यौगिक आँखाको जोडी छ
लामो, सजिलो खुट्टाहरू छन्
जब मौन वा पछाडि आराम पछाडि सधैँ खुला छ
शरीर र पखेटा राम्रो फर मा ढाकिएको छ
कूद गर्न चाहानुहुन्छ
उच्च उडान क्षमता पाँच मीटर सम्म
अण्डाहरू उत्पादन गर्न, महिला मक्खहरू बिरालो र एपबाट रक्त चाहिन्छ
एकपटक 30-50 कालो अण्डा बीच बिचमा
वयस्क मक्खन 10-11mm लम्बाइमा हुन्छन्
गाढा रातो भूरी खुट्टा।
रेत फ्लाई लाइभ साइकल
2 साढे वर्ष सम्म लाइभ गर्नुहोस्
1-2 हप्ताको लागि पोपा या कोकोन चरण
हाउस फ्लाइज (मस्का डोनेस्टिका)
गृह मक्ख प्रजातियों को मक्खनहरु जुन हामी वरपर सबै भन्दा सामान्य हो र रोग को वेक्टरहरु हो। महिला घरको मक्खन प्रायः एकपटक मात्र जोडी।
तिनीहरूले 100 अण्डा वरिपरि अण्डा राख्छन् कार्बनिक पदार्थहरू जस्तै खाद्य स्क्रैप, शयनकक्ष, वा मलहरू।
सभा मक्खनका विशेषताहरू
वयस्क गृह उडानको लम्बाइ 5-8 मिमी बीचमा छ
एक संकीर्ण रेखा4छ
एक खैरो छाती गुफा छ
पहेंलो पेट छ
उनको अनुहार ठीक कपाल संग समातेको थियो जुन अजनको स्वाद थियो
जटिल परिसर आँखाहरू
उनको आँखामा हजारौं लेन्सहरू छन् जुन विस्तृत दृष्टिलाई अनुमति दिन्छ
चार विंग रेजहरू पतित हुन्छन् र सीधै होइन (तुलसी)
चुम्बन सेतो छ
शरीरको आकार हेडको टिपमा टाढा छ
एक2पछाडि अन्त अन्वेषक
लार्वा टाढाको छैन
म्यागको लम्बाइले वयस्कको रूपमा 12 मिमी पुग्छ
बीएसएफ उडान वा कालो सैनिक मक्खी वा कालो सेनाको मक्खी एक शरीर हो जुन 15-16 मिमी र कालो बीचमा छ।
उष्णकटिबंधीय र उप-उष्णकटिबंधीय मौसममा कालो सैनिक उडान धेरै राम्रो बनाउन सक्छ। यसको वातावरण वातावरणमा जुन फूलहरु धेरै फूलहरु बढ्छ, उनी फूल फूल र बिहान ओखको चिसो चम्किन्छन्।
असाध्यै आवासमा देखा पर्यो किनभने यी मक्खन खाँदैनन्। अण्डा राख्न को लागी धेरै कचरा, कचौरा र गहिरो समावेश गर्दछ। एकपटक एक वयस्क महिलाले 185 - 1.235 अण्डाहरू अन्डा राख्न सक्छन्।
प्रजातिहरू: हेर्मेनिया बेग्लै हुन्छ
बिनोमियल नाम: हेर्मेटिया बेवकूफ (लिनिअस, 1758)
Musca Lucopa Linnaeus, 1767
Hermetia निग्राफैसीज बिगोट, 1879
Hermetia Mucens रैली एन्ड हवर्ड, 1889
Hermetia var। निग्रिबियाया एनडरलेन, 1914
बीएसएफ फ्लाइको विवरण
वयस्क बीएसएफ मक्खन लगभग 16 मिमी (5 / 8 इन्च) छन्। यो मध्यम आकारको फ्लाइको शरीरमा प्रायः कालो हुन्छ।
कालोमा नीलो र हरियो धातुले रंगीन र छातीमा कहिलेकाँही अनुहारको लाल रंगको टिप संग। दोस्रो पेट टर्जाइट (पेट) सँग एक पारदर्शी स्पष्ट क्षेत्र छ।
ठूलो हेराइ आकार र धेरै ठूला आँखा संग। एक एंटीना छ कि हेडको लम्बाई दोहोरो छ।6कालो पैदलहरु संग व्हाइटिस टासीसी संग।
बीएसएफ विङ एक झिल्ली जस्तो आकार हो। र बाँकीमा, पंखहरू क्षैतिज रूपमा पेट ओवरलैपमा राख्छन्। कालो सैनिक फ्लाइट एक नकल उडान हो।
समान BSF Wasps
जब आकार, रंग, र टोपीको जस्तो देखिन्छ र जस्तै जस्तो देखिन्छ। खास गरी किनकी मक्खी एन्टेना एक टोपी जस्तै उत्थान गरिएको छ।
पारसीले पीला उडानको फिर्ता र आधारभूत पेट खण्डमा दुई साना पारदर्शी "सञ्झ्याल" छ।
के मकले एक संकीर्ण "कमर थाप" जस्तो देखिन्छ। कालो उडान लार्वा घरको मक्खन र हरियो मक्खन जस्तै होइन।
कालो सैनिक फ्लाइटको फाइदा
फिर्ता सैनिक फ्लाइको सबैभन्दा ठूलो फाईदा उनीहरूको बच्चा वा लार्वा वा म्याग्गोट वा यूगेट इगेट वा म्याग्गोट हुन्।
पछि कुन औषधि, पुलिस, रेस्टुरेन्ट, रिप्लेलिङ र औद्योगिक पोल्ट्री माछा किसान किसानहरूले तिनीहरूको सम्बन्धित क्षेत्र अनुसार पाएका थिए।
22 बीएसएफ मानव मानव मित्रहरूको कारण छ
1। मानवहरूको लागि सुरक्षित
कालो सैनिक फ्लाई मानवको लागि खतरनाक र सुरक्षित छैन। असुरक्षित बीएसएफले घरको मक्खन र हरियो मक्खनमा उड्छ।
वयस्क बीएसएफ एक मुख छ तर मात्र पेय गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ, यो मानिसहरुको लागि रोग को वेक्टर होइन। बीएसएफ मक्खन काटेर वा दाँत गर्दैन जसले मानिसहरूको लागि यो सुरक्षित बनाउँदछ।
आफ्नो जीवनको समयमा बीएसएफले आफ्नो जीवन कायम राख्न खाएनन, तिनीहरूले फूलको काली र बिहान ओखलाई मात्र पकाए।
यो के हो जुन बीएसएफले मानिसहरूको लागि सुरक्षित बनाउँछ। र यसैले हामी बिस्तारै बीएसएफलाई घरमा सामना गर्छौं।
बीएसएफ रोग बाहिर निकाल्दैन
उडाईने र घर आउँदै जान्छ हरी मक्खन र खतरनाक घर मक्खनहरू किनभने तिनीहरू खाना खोज्न र रोग प्रकोप फैलन्छन्।
वयस्क लार्वा र बीएसएफ को कीट या वेक्टर को श्रेणी मा शामिल नहीं छ। यसको विपरीत, कालो सेना उडा लार्वा लाल कीड़े को रूप मा एक नै भूमिका निभािन्छ।
अर्थात् बेस्सरी, कचौरा र मल को डिसेप्टर को रूप मा कार्बनिक सब्सट्रेट्स को नष्ट गर्न र माटो को पोषक तत्वहरुलाई बहाल गर्न सक्छ।
बीएसएफ लार्वा नवीनीकरण प्रोटीन स्रोतहरु हुन्
काली सैनिक फ्लाइट लार्वा (बीएसएफ) एक एक्वा संस्कृति (अक्षय) प्रोटीनको स्रोत हो जुन एक्वा संस्कृति, पशु फिड, पशु र मानव पोषणको लागि धेरै राम्रो छ।
लार्वा एक धेरै ठूलो भूख छ कि एक दिन मा सब्सट्रेट को दुई पल्ट वजन खर्च गर्न सक्छ।
लार्वा पनि परिवार बायाँ, कचरा स्टाल्स, बजार कचरा रेष्टुरेन्ट बर्बाद गर्न को लागी प्रयोग गर्न सकिन्छ।
सब्ज र फलहरू, कृषि अपशिष्ट उत्पादनहरू र पशुधन भत्ता सहित पशुपालन तथा मानव अपशिष्ट सहित।
2। बीएसएफको मुँह "बिल्कुल सही छैन"
घरको मक्खनको विपरीत, बीएसएफले मुख को "असामान्य" भाग छ जुन खाईदैन र केवल फूल निकास वा आधा पानी जस्तै तरल पदार्थ उपभोग गर्न सक्छ।
किनभने यो बीएसएफ खाने छैन अन्य खानाहरू जस्तै पाचन एंजाइमहरूसँग खाना नखोल्नुहोस्, त्यसैले यो रोग फैलाउँदैन।
कालो उडान सैनिकहरू घर वा मानव खानामा आउँदैनन्। घृणा र प्रकोपोरसहरूको रूपमा, महिलाहरु लाई खाना या उर्वरक को खतरे मा अण्डाहरु लाई अधिक रुचि राख्छ।
कालो सैनिक उडान अरु मक्खनहरू जस्तै उड्दैन। वयस्कों को रूप मा खाना खपत को सीमित क्षमता को कारण काला सैनिक मक्खी कम ऊर्जा छ।
3। बीएसएफ चिन्ह
काले सिपाही उचाल धेरै सजिलै कब्जा गरीएको छ जब तिनीहरू घर प्रवेश गर्छन्, किनकि जब तिनीहरू पकड्न नदिने हुन्छ।
कालो सैनिक मल सफाई (सफा) र काटिन वा स्टिंग। प्राइभेटरहरू विरुद्ध मात्र रक्षा प्रवृत्ति उडान र लुकेको छ।
काले सिपाही उकालोको आबादीलाई कम गर्न प्युपालाई मक्खन गर्नु अघि तिनीहरू मक्खनमा घुम्न सक्दछ।
अर्को तरिका स्थिर, खुट्टा, मैन्युअल रूप देखि फिड जानवरहरू, स्वचालित खाना पकाउन चिकन कुप्पहरू राख्ने कन्टेनरहरू राख्न वा जंगली चराहरू खुवाउने।
4। Sakti बीएसएफ उडान
बीएसएफ द्वारा उत्पन्न ध्वनि पनि अन्य प्रकार को मक्खनहरु लाई दोश्रो गर्न सक्छ। और यदि एक क्षेत्र मा धेरै मक्खियों और बीएफ Maggot रहे हैं तो वहाँ कोई मक्खी और अन्य maggots कि घूमने की हिम्मत होगा।
5। कार्बनिक अपशिष्ट Decomposition एजेन्ट
एक दिनमा बीएसएफ चुम्बनले कार्बनिक अपशिष्ट, अपशिष्ट वा पशु अपशिष्टको रूपमा दुई पटक उपभोग गर्न सक्छ।
यसको अर्थ छ कि यदि हाम्रो 100 बी.एम.एफ म्यागको किलोग्राम छ, तब बेस्सरीको 200 किग प्रत्येक दिन बाहिर निस्कनेछ। बर्बाद हुन सक्छ कि अपशिष्ट सबै जैविक अपशिष्ट, बर्खास्त, पशुधन म्यानुरर, र मानव अपशिष्ट हो।
मागागाट फिड कार्बनिक अपशिष्ट को उदाहरण
मार्केट रद्दी (सब्ज र फल)
मैगगट फीड अपशिष्ट को उदाहरण
पाम तेल का झाडा
Maggot Feed Animal Litter को उदाहरणहरू
खरगोश खरगोश खाल
घोडाको माछा पालन
6। गन्ध बिना सफा गर्नुहोस्
सामान्यतया गोठालाहरू जस्तै गन्ध गाउनेछन्। बीएसएफ म्याग्गोट द्वारा जारी गरिएको माटोको विपरीत कुनै गंध छैन।
माग्गा जप्पिंग धेरै सानो कणुले जस्तै रेत वा चुम्बन को आकार को आकार हो।
7। पीएच एक्स्ट्रामा लाइभ लिन सक्नुहुन्छ
बीएसएफ लार्वा धेरै जिब्रो हुन जान्छ र यसको चरम पीडीमा बाँच्न सक्ने क्षमता छ। दुई-चार घण्टा शुद्ध शराब, नमक, एसिड र अमोनिया जस्तो।
सर्दीको तापमानमा वा खाना छैन भने बीएसएफ चुम्बनले पनीरहेको छ, छाती र छातीमा राख्नु पर्छ र जब हवाको तापमान सामान्यमा फर्काउँछ तब फेरि सुरु हुन्छ।
8। रिच पोषण र उच्च प्रोटीन
जादुई बीएसएफमा 40-56% कच्चा प्रोटीन, 30-36% ईथर निकाल्ने, 15-16% राख, 4.9- 5.2% क्यालसियम, र सूक्ष्म रूपमा 0.61- 0.64% फास्फोरस समावेश गर्दछ।
बीएसएफ लार्वा पोषक तत्वहरूमा धनी हुन्छ, अमीनो एसिड सामग्रीमा पूर्ण र प्रोटीनमा उच्च हुन्छ त्यसैले यो पशु चाराको रूपमा धेरै राम्रो छ।
मगगेट खाने पशुपालनको उदाहरण
सबै प्रकारको माछा
सबै प्रकारका चिकन
सबै प्रकारका चराहरू
सबै प्रकार को बतख
9। प्राकृतिक नियन्त्रित बीएसएफ जनसंख्या
बीएसएफ को औसत उमेर एक दिन 5-8 वरपर एक दिन 14 सम्म पुग्न सक्छ। आजको मक्खनको जीवन चरणको दौडान तिनीहरूले पिट्न वा पिसाब गरेर पुनरुत्थान गर्छन्।
घण्टापछि वा पुरुष कालो सिपाही उडानलाई घण्टापछि यो मर्नेछ। जबकि अन्डा राख्नु पछि काले सैनिक मक्खी महिलाहरू मर्नेछन्।
10। धेरै फास्ट लारवल विकास
अपशिष्ट, कोहनी वा कचौराको रूप मा फीड उपलब्ध गराएर, सानो लार्वा जो एक दिन 18 को आसपास औसत वयस्क चरण सम्म पुग्न को लागी छ।
त्यस हप्ताको बीचमा दोस्रो पङ्क्तिको ठूलो शरीर बढ्छ र 15.000 आकारमा बढ्छ।
लार्वा को यो अतिव्र गति वृद्धि मगग किसानहरु को लागि लाभ ल्याउँछ, जो खेती गर्न सकिन्छ र केवल दुई हप्ताहरुमा पशुधन को लागी दिइन्छ।
धेरै प्रजननहरूले आफ्नो जादुई दुई हप्ताको उमेरमा दिन्छन् किनकि यी लार्वाको बनावट कठिन छैन र माछा, कुखुरा र रित्तोले निकै मन पराएको छ।
11। धेरै अण्डा निर्माताहरू
महिला बीएसएफले 185 - 1.230 अण्डा बीच अण्डा राख्न सक्छ। यी अण्डाहरू खाना वा अपशिष्टको माथि परोपकारी रूपमा राखिएको तर भोजनको शीर्षमा।
अण्डाको संख्या बीएसएफ शरीरको आकारको आनुपातिक हो। महिला बीएसएफ जसले ठूलो शरीरको आकार र व्यापक प्वाइन्टहरू अण्डाहरूका लागि उच्च प्रवृति छ जुन सानो निकाय र पखेटाको तुलनामा तुलना गर्न सकिन्छ।
दुई दिनदेखि चार दिन पछि यी अण्डाहरू 1 इन्स्टा म्याग्रेटमा हट्नेछ र6लाई दुई देखि तीन हप्ताको बीचमा पठाउन वृद्धि हुन्छ।
ती अवस्थाहरूमा जहाँ 25-35 ° C. को बीच पर्याप्त खाना र हावाको तापमान छ। नयाँ टोपी आलुको आकार2मिमीको बारेमा हो, त्यसपछि5मिमी सम्म बढ्छ। र छालामा परिवर्तन पछि यो 1,5-2 सेन्टिमिटर सम्म हुन्छ।
12। Maggot BSF ओभरभोजेस
माग्गोट बीएसएफले मानव द्वारा खाएको सबै चीज खानु सक्छ र चाँडै बर्बाद, अपशिष्ट र खाना तोक्न सक्छ।
यो सुविधाले म्याग्गोट बीएसएफले संसारमा धेरै व्यक्तिहरूको उत्पादन गर्दछ। अर्को सुविधा हाम्रो वातावरणमा प्रशस्त खाद्य र उपलब्ध स्रोतको स्रोत हो र लगभग निःशुल्क प्राप्त गर्न सकिन्छ।
मगग फिड स्रोत प्राप्त गर्न को लागी सहज किसानहरु को लागी विकास को लागी कम लागत मा उत्पादन गर्न सकिन्छ।
13। वाइड ल्याण्डको लागि कुनै आवश्यकता छैन।
माछा र कुखुराको फाउजको रूपमा विशेष रूपमा चुम्बन उत्पादन गर्न Maggot व्यापक भूमि आवश्यक छैन। हामी घरको पार्किंग, साइड र पछाडिको सुरुवात आकार 3x4 मीटरको साथ प्रयोग गर्न सक्छौं।
यद्यपि यदि तपाईं पहिले नै बगैंचा आधुनिक बीएसएफ मगगको खेतीमा कुशल हुनुहुन्छ भने, तपाईं किबोमेन शहरमा युरी बर्फएफएस मित्र जस्तै घरमा खेती गर्न सक्नुहुनेछ।
माछा किसानहरूको लागि, कुखुरा र बीएसएफ मैगगट रित्तिकाहरू जनावरको भोजनको रूपमा प्रयोग गरिन्छ, र सामान्यतया फिड सामग्रीमा प्रशोधन गरिन्छ।
प्रशोधित मागेगाटको उदाहरण
14। सजिलो र व्यावहारिक
बीएसएफ मगगट उत्पादन गर्न धेरै सजिलो छ, कन्टेनरमा बर्बाद वा कार्बनिक बर्बाद प्रदान गर्न पर्याप्त छ र यसलाई एक क्षेत्रमा राख्नुहोस् जुन सीपमा प्रत्यक्ष रूपमा उजागर हुँदैन।
दिन भित्र बीएसएफ जादुई खेती गर्न सकिन्छ र पशुहरूलाई दिइन्छ। फलक को तरिका धेरै व्यावहारिक छ।
किनकि बीएसएफ मगगटले स्वाभाविक रूपले बर्बाद मिडियालाई बीएसएफ उडानमा राख्नु अघि पछाडि चरणमा परिवर्तन गर्न र गम्भीर र सूक्ष्म स्थान (आत्म कटाई) मा जान्छ।
15। नविकरण प्रोटीन स्रोतहरू
म्याग्गोटको सामान्य बुझाइ प्रोटीनको स्रोत हो जुन छिट्टै स्वाभाविक रूपमा पुनर्स्थापित गर्न सकिन्छ।
म्यागगट वा मगगको खेतीको उत्पादन अक्षय प्रोटीन उत्पादन गर्ने तरिका हो जसले मगगको निरन्तर उत्पादन प्रक्रियाको परिणाम हो।
यसको अर्थ छ कि बीएसएफ बीएसएफ र म्यागोट मक्खन धेरै लामो अवधिको लागि स्वभावमा उपलब्ध छन् त्यसैले त्यहाँ उलझन र संसाधनहरू बाहिर चलिरहेको बारे चिन्ता गर्न आवश्यक छैन।
यसैले उत्साही चुम्बन किसानहरूले माछा र कुखुराको लागि एक प्रोटीन स्रोतको रुपमा माग्बो उत्पादन गर्छन्।
16। क्यालोरी ऊँचाई
मागगटमा उच्च क्यालोरी वा एक ऊर्जा स्रोत छ कि जब पशुपालिकाले उपभोग गर्दछ भने माछा वा कुखुरा छिट्टै बढ्छ।
किनकी पशुधन गतिविधि बीएसएफ मगगबाट खाएको क्यालोरीले समर्थन गर्दछ। केवल भनिएको छ, क्यालोरीहरू ऊर्जाको लागि आवश्यक छ, माछा, कुखुरा र रित्तैलीहरू साथै मानवहरू पनि।
सार्न र शारीरिक क्रियाहरू राम्ररी सार्न सक्षम हुन ताकि शरीरमा रोगको आक्रमणको राम्रो प्रतिरोध छ।
उदाहरणका लागि, क्यालोरी सामान्यतया सामान्यतया ठूलो रूपमा 9,2 - 10,1% वोसोको रूपमा प्राप्त गर्नका लागि यी फिर्तीहरूलाई बीएसएफ मगगोटबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ।
म्याग्गोट जसको मोटो सामग्री हो 29,65 (फाल्मी एट एल, 2007)। तर जब उमेर देखि देख्यो, मगगोटमा% पोषण तत्वहरू छन्।
सुक्खा सामाग्री दिवस (बीके) मोटे प्रोटीन (पी.के.) मोटे मोटी मोटे ऐश
पहिलो जाँच गर्नुहोस्
माछाको आवश्यकताहरू भन्दा धेरै मगगको वोसो सामग्री हेर्न (अन्य जनावरहरूको लागि कृपया जाँच गर्नुहोस् कि यो खानेकुरामा अत्यधिक छैन)।
त्यसपछि यो राम्रो हुन्छ यदि बीएसएफ मगगस्ता पास्ता, आटा, चुम्बन छर्राहरू र यति रूपमा प्रयोग गरिन्छ।
यी मगगटहरू प्रशोधन गर्दा विभिन्न पोषक तत्वहरूबाट बचाउन विभिन्न तैयारीहरूमा बेरोजगार छन् र पशुपालनमा प्रतिकूल प्रभाव हुन सक्छ। यो पनि बर्बादी हो।
17। व्यापार अवसरको प्रतिज्ञा
पशु चारा उत्पादन वर्ष देखि वर्षमा 6,2% -8,1% बढ्यो 2018 मा पशुधन फिड उत्पादन 19,4 मिलियन चारामा बन्द भएको थियो।
पशुपक्षीको ठूलो मात्राको आवश्यकताले मगग उत्पादनले ठूलो अवसर दिन्छ।
मगगट किन्नका लागि लाभ यो हो कि तिनीहरू धेरै सस्तो र लगभग नि: शुल्क छन्, यातायातको शर्तमा पनि, तिनीहरू पनि धेरै कम छन्।
पशु फिडको तुलनामा, मूल अवयवहरूले माछा आटा आयात गरी यी कच्चा मालको वितरणमा उच्च लागतहरू आयात गरेका छन्।
स्मरण बिना सिक्नु
विभिन्न पक्षबाट, जग्गा किसानहरूले जित्न सक्दछन्, तर निस्सन्देह सस्तो र गुणस्तरको पशु फिड प्रदान गर्न, उनीहरूलाई सही मगग खेती कसरी सिक्ने आवश्यकता छ भनेर यो निरन्तर धेरै चुम्बन उत्पादन गर्न आवश्यक छ।
र यो सुरू बिना चुम्बन को खेती संग शुरू, शुरू देखि बुझ्न आवश्यक छ। तपाईंको Maggot पशुधन व्यवसायको लागि सुरक्षित र सहज हुन समुदायलाई डिमोइड नगर्ने।
सुरुको लागि हामी यी अवसरहरू सानो वा गृह स्तरमा पहिलो प्रविष्टि गर्न सक्छौं।
बढि ज्ञान र अनुभवले हामीलाई व्यापार विकासको लागि अझ ठूलो भरोसा दिलाउँछ।
18। उपयुक्त इन्डोनेसियाली जलवायु
गरम वातावरण र
इन्डोनेशियाको उष्णकटिबंधीय जलवायु संग, बीएसएफ (कालो सैनिक मक्खी) उडान गर्न सक्दछ र राम्रो तरिकाले प्रजनन गर्न सक्छ।
यो उष्णकटिबंधीय जलवायुको फाइदा यो हो कि यो बिना बग म्यागफोट बीएसएफएफ को सबै प्रक्रियाहरु बनािन्छ:
सस्ताको गन्धको बिना आधुनिक बीएसएफ माग्गोट खेती गर्दै
आधुनिक बीएसएफ मगग खेती बिना सजिलो गन्ध
बीएसएफको आधुनिक खेती बिना गन्ध मैने लाभदायक छ
आधुनिक बीएसएफ मैगगट खेती छिटो नतिजाको गन्ध बिना
सस्ता मल्ल बिना मगगट खेती गर्दछ
इंडोनेशियाको उष्णकटिबंधीय जलवायुले किसानहरूलाई मार्जिन उत्पादन बोझ कम गर्न मद्दत गर्दछ।
जब अन्य देशहरूको तुलनामा केवल दुई सीजनहरू छन्। एक बीएसएफले ड्रम बनाउन को लागी यो लाखौँ कोष सबै परिष्कृत र प्रकाश संग लिन्छ ताकि ड्रममा तापमान स्थिर छ।
जबकि इन्डोनेशियामा यो आवश्यक छैन किनकि इन्डोनेसियाको वातावरण अधिक स्थिर छ। त्यसैले 11-2 को तुलनामा ड्रम बनाउन, तपाइँ सैकड़ों लाखौं पैसा खर्च गर्न आवश्यक छैन।
इंडोनेशियामा आरएसएक्सएनएमएमएक्स-आरपीएक्सएनएमएमएक्स पैसाको साथ BSF बनाउन पर्याप्त छ।
आसान निर्दोष मगग खेती
मैगगोट उत्पादन गर्न, एक कारक तयार हुनुपर्छ जुन प्राकृतिक स्रोतहरू मगगोट बनाउन मूल सामग्रीको रूपमा हो।
कार्बनिक अपशिष्ट, अपशिष्ट, पशुधन आदि जस्तै। सबै आधारभूत सामग्रीहरू प्राप्त गर्न सजिलो छ। मगगोट वा थप फाईदा एक आसान मैगगोट व्यवसाय सुरु गर्न को लागी बनाउनको लागि आधारभूत सामग्री प्राप्त गर्न सजिलो छ।
र यी अवयवहरू अहिले हाम्रो वरपर प्रचलित मात्रामा उपलब्ध छन्। बस बजारमा मलबे ढिला हेर्नुहोस्, सडकमा र ल्यान्डफिलमा।
अपशिष्ट लुग्ले उल्लेख गर्नु हुँदैन, मालिकले फ्याँकिएको ताल्ल तेल। पशु अपशिष्ट सहित कि आसपासको वातावरण बिखरे र बिग्रिएको छ।
मगग सामग्रीको उपलब्धताको साथ, मगग व्यवसायलाई लागु गर्न सजिलो बनाइयो।
निर्दोष मगगोटको अधिक निर्दोष खेती
प्रारम्भिक लगानीको कम लागत र मगग उत्पादन उत्पादन प्राप्त गर्नका लागी मेगागाट व्यवसाय लाभदायक हुन्छ।
किनकी केवल एक अपेक्षाकृत सानो पूंजी सुरु गर्न र कच्ची सामग्रियों को उपलब्धता बनाउन को लागी सजिलो बनाउन उत्पादन लागत र व्यापार निरंतरता अधिक लाभदायक बनाउन सक्छ।
छिटो अन्डरलेस मगग खेती परिणाम
उष्णकटिबंधीय मौसममा म्याग्दीको बीएसएफको विकास गैर-उष्णकटिबंधीय देशहरूको तुलनामा धेरै छिटो छ।
म्यागगोट BSf उष्णकटिबंधीय मौसममा एक दिन मात्र 18 मा काटिएको हुन सक्छ। र बीएसएफ जादुईहरू पनि खेती गर्न सकिन्छ जब तिनीहरू केवल एक हप्ता पुरानो हुन्छन्।
एक उष्णकटिबंधीय वातावरण मा म्याग्वे उत्पादन गर्न छोटो समय चाँडै र सस्तो रूपमा खुवाउनका लागि किसानहरूको लागि धेरै सहयोगी छ।
त्यसैले त्यो जनावरको खाना आवश्यक पर्दछ।
19। कैद गर्ने क्षमता सबै ठाउँमा छ
मगगढी उत्पादन गर्न, त्यहाँ धेरै उपकरणहरू र उपकरणहरू छन् जुन बीएसएफ ड्रम, बीएसएफ अण्डेन्ट कंटेनर, अण्डा रैक, बायोट्रोग म्याग्गोट वृद्धि आदि जस्ता प्रदान गरिएको हुनुपर्छ।
बीएसएफ ड्रम बनाउन को लागि नयाँ अवयव को उपयोग को आवश्यकता छैन, तपाईं बेसार सामग्री वा प्रयोग नभएको काठ, स्क्रैप धातु र बाबूको रूपमा अप्रयुक्त सामग्रीबाट बीएसएफ ड्रम बनाउन सक्नुहुन्छ।
बीएसएफ पिंजहरु मक्खन को लागि एक प्रजनन स्थान को रूप मा बनाइन्छ ताकि उनि हरेक ठाँउ उडान न गर्नुहोस। बीएसएफ ड्रम प्रदान गरेर बेशक अंडा उत्पादन को आवश्यकता को रूप मा समायोजित गर्न सकिन्छ।
बीएसएफ अन्डाका लागि कन्टेनरहरू बेसिन, बाल्टीहरू, प्रयोग हुने ग्यालन, आतंक आदिसँग हुन सक्छ। बीएसएफ ड्रमबाट लिइएका वा निकासी भएका अन्डा अन्डाहरू यी कन्टेनरहरूमा कुचल भए।
त्यसोभए एक रैक मा व्यवस्थित गर्न को लागी यो अधिक आविष्कारक को प्रत्याशा को रूप मा अधिक संगठित गर्न को लागी।
बीएसएफ अन्डा रैक
बीएसएफ अण्ड रैकहरू काठ, बांस र अन्य बर्बाद सामग्रीको रूपमा सरल रूपमा लिन सकिन्छ। बायोच ह्याच र त्यस पछि बायोट्रोन वृद्धिमा पठाइएपछि प्रक्रियामा म्यागगटको विस्तारको लागि एक कंटेनरको रूपमा बायोट्रोन।
बायोटोंग स्ट्याक्किङ रैक प्रणालीहरू जस्तै पृथ्वीमार्ग रक्स बनाउन सकिन्छ।3लाई4स्ट्याकिङमा व्यवस्थित गर्नुहोस्।
यस तरिका मा जग्गा को खेती गेराज मा या एक उत्थान घर को यार्ड मा संकीर्ण भूमि लाई अधिकतम गर्न सक्छ।
बायोटोंग पनि माछा तालाब बनाउन तर ऊ 30 सेन्टिमिटरको उचाईमा जस्ता जस्ता सिमेन्ट सामग्रीहरू पनि बनाइन्छ।
20। नि: शुल्क बीएसएफ ब्रोडर र प्रकृति देखि अण्डा
इन्डोनेसियामा प्रत्येक स्थानमा बीएसएफ मक्खी हुन्छ। कन्टेनरमा भान्साको बाँकी अवयवहरू प्रदान गर्ने तरिका, बीएसएफ प्रजातिहरू आउनेछन् र प्रदान गरिएका कन्टेनरहरूमा अण्डाहरू राख्छन्।
बाहिरी भान्साको बाहिरी भागमा धेरै अधिक छन् जुन लामो समयसम्म सामग्रीहरू कार्बनिक श्रेणीमा समावेश छन् र विषाक्त छैनन् वा कीटनाशकहरू छैनन्।
21। हरियाली र पर्यावरण अनुकूल मित्रतापूर्ण दुर्गम
बीएसएफले शक्तिशाली आवाज पुनःहत्या गर्ने घरको मक्खन र हरियो मक्खनहरू छन्। त्यसैले कि सब्सट्रेट मिडियामा हामीले तयार गरेका थियौ त्यहाँ घर मक्खन र हरियो मक्खन संग मिक्स र मिक्स हुनेछैन।
यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ त्यसैले हाम्रो चुम्बकीय खेतीहरू रोग-लेने मक्खनबाट बाँधिएका छन्। कुनै गंध, सुरक्षित र सजिलो गर्नेहरूको लागि सहज वातावरण वा वरपरको वातावरणमा।
22। Maggot BSF एक चिकन किसानको मित्र हो
मागागाट कालो सैनिक उडानले चिकन खाडीमा ई E. कोलो 0157: H7 र साल्मोनेला इन्टेिकालाई कम गर्न सक्छ।
मैग्लट कालो सैनिक मक्खीले चाँडै प्रदूषकहरूलाई मार्छ, 24 घण्टामा अशुद्धताको नौ कार्बनिक रसायन।
कालो सैनिकले चाँडै भाँडोको मात्रा र वजन कम गर्छ। लार्वल कलोनीहरूको मार्गमा तिनीहरू खाना तोड्न र गर्मी सिर्जना गर्छन्, कम्पासको वाष्पीकरण बढाउँछन्।
महत्त्वपूर्ण मात्रा पनि कार्बन डाइअक्साइडमा म्यागगोट र सिम्बायोटिक / परस्परवादी सूक्ष्मजीवहरु द्वारा बहिष्कार गरिएको छ।
कम्पास प्रणालीमा लार्वा सामान्यतया कम्पोस्ट भोल्युमको बारेमा 50% को कम गर्दछ। र यो 90% BSF को साथ आधुनिक Bau खेती विधि संग Yurie बीएसएफ संग पुग्न सक्छ।
बीएसएफ फ्लाइको वितरण
यो प्रजाति मूलतः न्यूट उष्णकटिबंधीय एक्लोन बाट उत्पन्न भएको छ, तर हालका दशकहरूमा यसले सबै महाद्वीपहरूमा फैलिएको छ, लगभग समसामयिक हुन।
बीएसएफ आईबियन प्रायद्वीप, दक्षिणी फ्रान्स, इटाली, क्रोएशिया, माल्टा, क्यानरी टापु र स्विट्जरल्याण्ड सहित धेरै युरोपमा उपस्थित छ।
बीएसएफ अफ्रोरोप्रोक एक्जोजोन, एक्जोजोन आस्ट्रास्लोअस, पूर्वी पालार्किक एकोजोन, नजिकैका एकोजोन, उत्तरी अफ्रिका र इकोजोन इण्डोमलाय क्षेत्रमा पनि फेला पार्न सकिन्छ।
बीएसएफ लाइभ चक्र
वयस्क महिला मक्खन एकैपटकमा 185-1.235 अण्डा बीच अण्डा राख्छ। यी अन्डाहरू सामान्यतया दरारहरू वा माथि सतहमा वा जैविक सामग्री जस्तै मनिचर वा कम्पास र 2-4 दिनको बारेमा ह्याचिंगमा भण्डारण गरिन्छ।
नयाँ टोपी लार्वा 0,04 इन्च (1 मिमी) लामो, लार्वल चरणको अन्तमा 1 इन्च (27 मिमी) लामो र 0,10 सम्म 0,22 जी सम्म पुग्न सक्षम छ।
लार्वल चरण 18-22 दिन वरिपरि रहन्छ, जहाँ प्रिपिपी चरण7दिनको बारेमा हुन्छ। लार्वल चरणको लम्बाइ कम तापमान वा खानाको कमीमा केही महिना भित्र ढिलाइ र विस्तारित हुन सक्छ।
कोकून चरण 1 बाट2हप्ता सम्म हुन्छ। वयस्क मक्खी5- 8 दिनहरू बीचमा बाँच्न सक्दछन् जब मधुमेह वा जावा शताब्दीमा कैदमा पर्दा वा उनीहरूको मनपर्ने पेय जंगलमा छ।
लार्वल चरणको समयमा वयस्क फ्लाइको फ्याँस रिजर्भेसनसँग बस्छ।
बीएसएफले यसको अस्तित्व पुनरुत्थान गर्न एकदम सही morphosis मा छ। सही मेटामोरोफोस जीवित जीवन चक्र वा जीवन चक्र हो जुन4को आफ्नो जीवन मा चरणहरु को अनुभव गर्दछ।
एक जीवन चक्रमा BNSF ले 40-44 दिनको बीच लिन्छ। समय अवधि कारखानामा निर्भर गर्दछ जस्तै ख्याल र खानाको तापमान।
बीएसएफ उडान अद्वितीय छ किनभने यसको जीवन चक्रमा थप चरणहरू छन्, अर्थात्5चरण निम्नानुसार छन्:
बीएसएफ चरण चरणमा छ
वयस्क / इमेज फ्ली चरण
वयस्क मक्खी वा इमगोको चरण हो भने पपाको यसको खोलबाट बाहिर निस्कने प्रक्रिया पछि। यस इकोगो चरणमा बीएसएफसीले खाएको छैन र केवल आफ्नो जीवनकालको समयमा पिउन।
युवा बीएसएफले यसो भन्छ कि भर्खरै रमाईलो छ र उनीहरूको गोलाबाट बाहिर आउँदछ र केवल 12 घडी भित्र बिस्तारै वयस्क मक्खनमा परिणत हुनेछ।
नयाँ पकाएको मक्खन कोकून म्यानबाट बाहिर आउनेछ र सूर्यलाइट र पेय स्रोतहरु खोज्न उडान र फ्रोइ उड्ने।
एक बीएसएफ वयस्क उडान को उमेर धेरै छोटो छ, जो 5-8 दिन को बीच हो, यो जलवायु, नमी र पेय को स्रोत को कारक देखि प्रभावित छ।
एक बिजुली परिपक्व वयस्क पछि बीएसएफ मक्खन वा मिलन हुनेछ। बीएसएफ मक्खनसँग कम समयमै प्रभावकारी र मात्र कार्यान्वयन गर्ने क्षमता छ।
बीएसएफ मनपर्ने पेय
बीएसएफको मनपर्ने पेय बिहान ओभर र फूल लगाउने शहद निकाय हो। एक कैदी पिंजरामा हामी जावा श्यारीलाई पनि शहदको विकल्पको रुपमा दिन सक्छौं।
तपाईं यो ड्रम भर मा तरल छिपाएर यो गरौं।
पुरुष आमाबाबुलाई भेट्न वा मोजा गर्ने प्रक्रियामा महिलालाई नजिक पुग्ने छ। महिला बीएसएफ जननाथलहरूको नजिकको प्रक्रियामा निश्चित स्तरमा घुमाईएको छ र अस्थायी हुन्छ।
पुरुष उडाको स्थिति प्रारम्भमा महिला र शरीरमा उफाइरहेको छ, तिनीहरू एउटै दिशामा सामना गरिरहेका छन्, तर केहि सेकेन्डमा त्यसपछि एकैपटक उल्टाउने र एकअर्कालाई विपरीत पार्छ।
फ्लाइट तापमानको यस चरणमा एक कारक हो जसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ तापनि तापमान। बीएसएफ मक्खीहरूको लागि इष्टतम तापमान 30 ° C. को तापमानमा छ।
यद्यपि BSF ले आफ्नो जीवनकालको समयमा खाना चाहिँदैन, यो अझै पनि पेय दिइनेछ। मक्खनमा महाराजको रूपमा पेय देएर उपचारले अण्डा उत्पादन बढाउँछ।
महोदया वा पानी वा जावानीश्रीको पानीले मक्खनको उमेर बढाउने असर दिन्छ।
र यो मक्खी को विस्तार को दिन मा संख्या र मक्खन को लागि बिछाउने अंडे को संख्या को संख्या मा देख्न सकिन्छ।
मक्खन उमेर को विस्तार को दिन को संख्या
10-11 दिन मधुमेह दिइएको बीएसएफको मृत्युको शिखर हो
5-8 दिन बीएसएफको मृत्युको पेय पानीको शिखर हो
बिस्तारै उडा अण्डाहरूका लागि दिनहरूको संख्या
5 दिन मक्खनहरूमा अण्डाहरू राख्ने चोटी दिन हो जसले शहद दिइन्छ
7 दिन मक्खनहरुमा अण्डा बिछ्याउने पीक दिन हो जुन पिउने पानी दिइएको छ
अण्डा राख्ने 10-30 मिनेटको बीचको समय एक महिला बीएसएफ हो। 546-1.505 वस्तुहरू बीच औसत संख्याको साथ।
16,2-18,9 मिलीग्राम र 0,027-0,032 मिलीग्राम बीचको प्रति हेडको बीच बीएसएफ अण्डको माझ। चोटी समय सामान्यतया 11.00-15.00 को बीच अण्डा लगाउँदैछ।
महिला बीएसएफले मात्र एक चोटि अण्डामा राख्छ, र धेरै घण्टा पछि मर्छ।
थप बीएसएफ महिला महिलाहरु
ठूलो बीएसएफ महिला फ्लाइज सामान्यतया महिला मक्खियों भन्दा सानो आकारको तुलनामा बढी अण्डा उत्पादन गर्दछ।
बीएसएफ मक्खीको आदर्श बिछाने शक्तिले 55-60% बीचको आर्द्रतामा हुन्छ।
वयस्क मक्खी 24 ° C (75 ° F) मा 40 ° C (104 ° F) वा अधिक मा ओटिपिट हुनेछ। 99,6% oviposition को बारेमा 27,5-37,5 ° C (81,5-99,5 ° F) मा हुन्छ।
क्वार्ट्ज-आयोडिन लैंपहरू सफलतापूर्वक प्रयोग गरिएको वयस्क वयस्क मक्खन उत्तेजित गर्न। उष्णकटिबंधीय अवस्थाहरूमा, बिहान र दिउँसो पर्याप्त सिडलाइटको लागि बीएसएफ को उत्तेजित गर्न र अण्डाहरु लाई मेटिन्छ।
जबकि अप्रत्यक्ष सूर्यलाइट अधिग्रहण पहिले देखि नै र पछि बीएसएफ छ।
70 मा आर्द्रता आफ्नो जीवन चक्र को सबै चरणहरु को लागि इष्टतम मानिन्छ। सब्सट्रेट कोक्रोन को लागी स्पष्ट रूप देखि आवश्यक छैन, तर सब्सट्रेट नमी को नियामक को रूप मा कार्य गर्दछ जसलाई सुखाने को रोकथाम गर्दछ।
93% fly flyching को स्तर जब 70% मा नमी बनाए राख्छ।
कालो सेना उडान लार्वा मानव द्वारा खाएको हुन सक्छ। लार्वा प्रोटीन, 56 प्रोटीन सम्म, कैल्शियम मा अमीर र पूर्ण अमीनो एसिड मा परिवर्तन गर्न धेरै कुशल छन्।
432 घण्टामा, काले सेना फ्लाइ अण्डको 1 2,4 किलोग्राम प्रोटीनमा परिवर्तन गर्छ, जसको अर्थले 45.000 जी अण्डाहरूमा 1 अण्ड भन्दा बढी छ। यसरी, तिनीहरू मानव उपभोगको लागि प्रोटीनको स्रोत हुन सक्छन्।
तिनीहरूले प्रोटीन उत्पादन गर्दैनन्, तर प्रोटिनहरू परिवर्तन गर्दैन जुन मानव द्वारा व्युत्पन्न छैन खाद्य खाद्य हुन्छ।
विशेषता मैग्लट स्वादले पकाएको आलु जस्तो थोपा लगाउँदछ।
बीएसएफ अण्ड चरण
अण्डा चरण2-4दिनमा हुन्छ। अंडाको वातावरण वरिपरि तापमान र नमीको कारणले गर्दा समय फरक हुन्छ।
सामान्यतया महिला महिला बीएसएफ मक्खीले अण्डालाई ठाउँमा राख्नेछ र प्रचुर मात्रामा कार्बनिक सामग्रीले आफ्ना छोराछोरीको लागि प्रेमको रूपको रूपमा राख्नेछ जब उनीहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई हानिकारक "गरीब" र भोकमरी नगर्ने हुन्छ।
स्थानहरू जहाँ बीएसएफ अण्डहरू बीएसएफको आमाबाबुद्वारा राखिएका उदाहरणहरू
अपशिष्ट निपटान साइट
अण्डा चरणमा, एक महिला महिला समूहले 185-1.235 अण्डाहरूको बीचमा धेरै अण्डाहरू उत्पादन गर्नेछ वा प्राय: क्लस्टर भनिन्छ।
बीएसएफको अण्डाको आकार को 0,7mm को लंबाई को साथ अंडाकार हो, जब यो मासु मातृभाषा द्वारा राखिएको छ, यो अण्डा स्पष्ट सेतो छ।
र त्यसपछि बिस्तारै रङ सुनको पहेंलो हुन्छ। हड्डीहरू छुट्याउने वा नगर्ने भेद गर्न, यो विधिको जाँच गर्न वा BSF को अन्डाहरू हो।
यदि रङ थोडा रातो रातो (नारंगी) मा परिवर्तन गर्दछ र अण्डा व्यवस्थाको आकार अब स्वच्छ वा गन्दा छैन।
त्यसोभए हामी पक्का हुन सक्दछ कि अण्डाहरू लुकेको छ र लार्वा वा म्याग्गोट वा जादुई वा उगेट-इगेटमा परिणत भयो।
बीएसएफ अन्डाको इन्सुलेट गर्न मिडिया कुनै पनि कार्बनिक सामग्री जस्तै फोहोर, कचरा र खाँचो हुन सक्छ।
बीएसएफ लार्वा को प्रयोग गर्न को लागी पशुपालन फीड मा कचरा या कनवर्ट कन्वर्ट गर्न को लागी व्यापक रूप देखि प्रयोग गरिन्छ। Prepupae harvested को कुखुरा फिड, माछा, सुँगुर, छेउ, कछुए, दाँतका ड्रेगनहरू र कुत्तेको रूपमा दिइएको छ।
बीएसएफ लार्वा बायोमास मा फीड बदलन को लागि सबै भन्दा कुशल जानवरों मध्ये एक हो। प्रोटीन उत्पादनको अतिरिक्त, उडान लार्वा पनि अन्य बहुमूल्य स्रोतहरु जसलाई फ्रेस (कासगोट / प्रयोग गरिएको म्याग्गोट भनिन्छ) उत्पादन गर्दछ।
कास्गा एक अनाज र नराम्रो अवशिष्ट हो जुन जैविक उर्वरकको रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। बीएसएफ लार्वाले सिकेपछि अघिल्लो चरण (प्रिपुपाइ)6वटा इन्टरनेटमा प्रवेश गर्नु अघि।
(यस जानकारीमा छलफल तीन चरणहरूमा सरल बनाइएको छ र बुझ्न सहयोगको लागि सहयोग र तपाईंको अभ्यासमा कम हुन्छ)।
जहाँ लार्वा चरणमा प्रिपुपा मा अब खाँदैन, र उनीहरूको पेटको सामग्री खाली गर्नुहोस्, तिनीहरूका मुखका भाग हरूमा घुमाउँछन्।
पहिलो instar चरण
दोस्रो र तत्काल चरण
तेस्रो पछाडि चरण
Instar चरण I
यो पहिलो पछाडि चरणमा सानो लार्वाले सक्रिय रूपमा खाद्य स्रोतको दिशामा जान्छ। लार्वाको यो पहिलो चरणको प्रारम्भिक रूपमा यसको वृद्धि प्रक्रियाको लागि ठूलो मात्रामा खानाको अवयवको रूपमा आवश्यक हुन्छ।
1 -2दिन अन्तराल पछि, पहिलो instar चरण छालाबाट जारी गरिनेछ र दोस्रो instar चरण प्रविष्टि गर्नुहोस्।
दोस्रो पछाडि चरणमा, लार्वासँग ठूलो आकार छ जुन 4-5mm वरपर वरिपरीको पहिलो चरण हो, जुन पहिलो चरणको पछाडिको विशेषता हो तर मुखमा पहिलो पछाडि चरण भन्दा ठूलो छ।
अन्डरियर स्प्रिराको भागमा छ जुन सानो ढोका छ। र फेरि पिक गर्न जाँदा तेस्रो इन्टरनेसनल चरण बृद्धि हुन्छ जुन अधिक दृश्यात्मक हुनेछ।
Instar चरण III
तेस्रो तत्काल चरणमा, लार्वाले उपलब्ध फिड (उपलब्ध) भन्दा 15mm वा बढी निर्भरता बीचमा हुन्छन्।
लार्वाको तेस्रो तत्काल चरणमा पहिले नै एक कणिकल छ र सक्रिय रूप देखि एक नमी स्थान पत्ता लगाउन को लागी चल्दछ र बारम्बार र सीधा सूरजको रोशनीबाट प्युपा वा कोकोनमा सुरक्षित हुन्छ।
प्राइपप्युब माइग्रेसन प्रकोप, जुन मगग किसानले आफुको प्रपिपुपा आत्मसात गर्न प्रयोग गर्दछ।
एक बायोट्रो कन्टेनर प्रदान गरेर स्वचालित कटाई गर्ने विधि हो कि एक ढलान मार्ग हो वा यो एक सीढी पनि प्रदान गर्न सक्छ जुन प्रीपपापले बायोट्रोन र संग्रह क्षेत्रमा पतन गर्न अनुमति दिन्छ।
लार्वाको लागि इष्टतम तापमान चाँडै बढ्न सक्छ 30 डिग्री सेल्सियस।
मागागाट कालो सैनिक मक्खन निकै बलियो छ र कीड़े भन्दा बढी अम्लीय र उच्च तापमानको अवस्था सामना गर्न सक्छ। कालो सैनिक मल लार्वा जाडोमा बाँच्न सक्दछ।
यदि आबादी धेरै घना छ भने र कालो सैनिक मल लार्वा भाग्न सक्नेछ, र कचरा डिब्बा वा कम्पासमा पाइने सूक्ष्मजीवणहरु द्वारा अत्यधिक गर्मी उत्पन्न हुन्छ।
प्रस्पुपा चरणमा लार्वाले अधिक परिपक्व ऊतकमा बढ्दो पूर्ण ऊतक छ।
यस चरणमा यो7दिन नजिक हुन्छ तर प्रत्येक स्थानमा तापमानद्वारा पनि प्रभावित हुन्छ। तापमान 26-33 ° C. को बीचमा छ।
प्रस्पुपा चरण मा लार्वा को शरीर को रंग को लार्वा काली बारी। लार्वामा रंग परिवर्तनहरू लार्वाको चिन्हको रूपमा परिपक्व हुन्छन् र पपाको वा कोकूनमा बदल्न तयार छन्।
महिला विकासका लागि उनीहरूको विकासमा पुरुष मर्खा भन्दा कम सब्सट्रेट वा मध्यम लामो हुन्छ।
महिला लार्वाको लागि थप वजन
र महिला लार्वा पुरुष लार्वाको तुलनामा अधिक वजन हुन्छ। Prepupa चरण मा प्रीपपपा लार्वा स्वाभाविक रूपमा मिडिया छोड्छ।
एक ठाउँको लागि जहाँ घाटी प्रत्यक्ष सूर्यको रोशनी र वर्षाबाट सुरक्षित छ खोज्नुहोस्।
पूर्वपापी डायालले पत्तियां, टाइलिएको ढिलाइ, पशुपालन को ढेर, हथेली तेल हल्लाई ढिलाइ र यति मा पाइन्छ।
यो कुखुरा, माछा, पक्षी, बतख, कुत्तों, चूहों र यति जस्तै शिकारियों देखि बचने को लागि यो गरिन्छ।
यी पशुहरूका लागि (प्राइभेटर) मासुको जस्तै प्राइपपुपाको लागि स्वादिष्ट र प्रोटीनमा उच्च छ। सामुदायिक द्वारा दैनिक जीवनमा यो तयारी अक्सर प्रायजसो बीउ वा दुलहीको रूपमा उल्लेख गरिन्छ।
यदि तपाईं प्रकृतिबाट प्राइपप प्राप्त गर्न कठिनाइ हुनुहुन्छ भने। विकल्प मगग किसानबाट किन्न चाहन्छ।
Prepupa गुण समान छैन
Maggot एक सर्वोच्च पशु हो, जसको मतलब यो लामो समय सम्म खाना खाए जस्तै यो जैविक श्रेणी मा छ।
एक प्रपपापमा बढ्दै गर्दा हाराहारीमा खाना वा लार्वालाई खाना दिइने धेरै प्रिपुपाको गुणस्तरमा प्रभाव पार्छ।
यसबाहेक, ती तयारीहरू उद्देश्यको लागि प्रयोग गरिनेछ प्रजननहरू फेरि खेती गर्न सकिन्छ।
यदि फिड दिइन्छ केवल कचरा वा पशुधन खाडल वा चोकरको रूपमा मात्र हो, निस्सन्देह यस प्रकारका प्रपपापी एक इन्फ्यूजनको रूपमा निम्न गुणस्तरको हुनेछ।
यो प्रकारका प्रपपाप मात्र राम्रो हुन्छ यदि म्याग्गोट प्रसोधन गरिएको सामाग्रीको रुपमा प्रयोग गरिन्छ। पुन: खेतीको लागि प्रयोग गरिने टाढाको लागि होइन।
कच्चा र गैर-ढाँचायुक्त फिडको प्रावधानले प्रिपपाप पोषक तत्वको कमीबाट ग्रस्त बनाउँछ र टाढाका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
मगग किसानहरूले बुझ्दैनन् र उत्थान फिड प्रदान गर्दैन र यो ब्रोडरहरूको रूपमा बेचेको बेवास्ता हुनेछ।
वास्तवमा यो किनभने किनभने तिनीहरूले बुझ्दैनन्। र केवल माल बिक्री गरिन्छ जब सम्म हेरविचार लागत को कम गर्न उन्मुख छ।
तर तपाईं मध्ये जो को लागि बीएसएफ को विकास र खेती गर्न चाहते हो, यो लापरवाही को बीउ किनारा गरेर मगग खेती शुरू गर्न को लागि सिफारिश छैन।
किनकि तपाईं किन खरीद गर्नुहुनेछ फेरि फेरि खेती गरिन्छ। मागागाटको मासुको उत्पादन बिक्री गर्न उन्मुख छ मगगको खेतीलाई कसरी खेती गर्न सकिन्छ भनेर बुझ्न सकिन्छ।
किनकि मूलतः मागगोटको चरित्र "गट लोड" हो।
गट लोड के हो?
गट लोड यो प्रक्रिया हो जसको द्वारा जनावरहरू उठाइएका छन् र पोषणशील खाना खानका लागि यो पोषक तत्वहरूलाई तिनीहरूलाई शिकार गर्नेहरूलाई प्रदान गर्न।
यो शब्द प्रायः मगगोटको तयारीको सम्बन्धमा प्रयोग गरिन्छ जसलाई पुन: खेतीको लागि प्रयोग गरिएको हो।
व्यापारिक रूपमा पालतू व्यवसायको लागि उठाइएका म्यागोटहरू पूरा पोषणको मान हुनुपर्छ।
ब्रोडस्टकमा बनाइनु पहिले उच्च गुणस्तर लार्वा दिने गरी, प्रिपपापाले ब्रोडस्टकको रूपमा राम्रो गुण पाउनेछ। उपाध्यक्ष।
सामान्यतया फलफूल, सब्जियां, र अनाजहरू वा कृत्रिम आहारहरू प्रदान गरी पोषण लोड पूरा गरिन्छ।
केहि व्यावसायिक उत्पादहरू उपलब्ध छन् र विशेष गरी गट लोडहरूको लागि ट्रिपल एम वा जादुई मिडिया म्याग्गोट जस्ता प्रबलित हुन्छन्।
ट्रिपल एम या3एम उत्पादनहरु को पहिले देखि नै कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, भिटामिन, खनिज र आहार फाइबर को एक संयोजन छ।
पुपा या कोकून चरण मा, त्यो चरण जहाँ सर्वोत्तम पिल्ला पोषण हो। महिला पुपा (कोकोन) 10% -15 को बीच पुरुष भन्दा बढी वजन हुन्छ।
तिनीहरू धेरै हप्ताको लागि कोठाको कोठामा भण्डारण गर्न सकिन्छ, र यदि तपाईं पपाको जीवन विस्तार गर्न चाहानुहुन्छ भने, तपाईं यसलाई 10-16 ° C. को तापमानमा भण्डारण गर्न सक्नुहुन्छ।
एक चुम्बन वा पपूपा ब्रोड इन्सुब गर्न कसरी एक कन्टेनरमा तयार हुन सक्छ र मिडियालाई कम्प्लेटको रूपमा दिइन्छ।
निम्न पपापा कम्पासको रूपमा प्रयोग गरिने पाँच सब्सट्रेटहरूको तुलना हो। यद्यपि सब्सट्रेट, बालुवा, माटो हास्य, छाला प्रयोग नगर्नुहोस्।
मिट्टी र ओरालो सब्सट्रेटको साथ पिपुले जमीन वा आँसु भन्दा छिटो छ। सबैभन्दा छिटो ह्याच एक पोपा हो जुन कम्प्लेट (सब्सट्रेट) छैन
तापमान, इष्टतम BSF 8-11 दिन र 29-30 ° C. को बीचको जीवन चक्र उडान गर्दछ। 30 डिग्री सेल्सियस माथि तापमान मा अधिकतम अन्डा विकास
फिड, राशि र फ्लाइ अण्डको विकासले फीड दिइएको गुणस्तरमा धेरै असर पारेको छ। फिडमा अधिक पोषक तत्व सामग्री, बीएसएफ लल्ट भन्दा ठूलो। उपाध्यक्ष। मनपरेको चुम्बनहरू हट्ने असफल हुनेछ वा एक साधारण परिणाम धेरै अण्डाहरू छन्
बीएसएफ मक्खीको विकासको लागि लाइट, प्रकाश तीव्रता महत्त्वपूर्ण छ। बीएसएफले उज्यालो ठाउँहरू मनपर्छ
मिडिया, उच्च पोषक तत्व सामग्रीसँग मिडिया म्यागगटको गुणस्तरको आधा आनुपातिक हुन्छ। ट्रिपल एम (म्यागजिन मिडिया म्याजिक), ताड तेल केक (PKM) जस्ता उत्तम मिडिया।
फरक बीएसएफ पुरुष र बीएसएफ महिला
पुरुष शरीर मक्खन साना छन्
पुरुष विंग मक्खन छोटो छ
पुरुष पेट3पेट दुखाइ, र महिलाहरुमा 6
पेट एक उदासी पुरुष र एक चिनारी महिला हो
पुरुषसँग कुनै महिला सहन यौन सम्बन्ध छैन
मागेगाट खेती समस्या
बीएसएफ खेतीको निर्माणमा मुख्य कठिनाई BAU हो। सुरुबाट सही र सही खेती विधिहरूमा ध्यान दिनुहोस्।
यदि तपाईंको चुम्बन खेती गरिरहेको छ भने, यो ठूलो समस्या हो। असहज हुनुको कारणले गर्दा गंधले चूहों, हरियो मक्खन, काक्रोच, साँप जस्ता प्रहार र कीटहरुलाई पनि निम्तो दिन सक्छ।
कीटका अलावा, जग्गा खेती गर्ने सबैभन्दा ठूलो खतरा पारिवारिक र पर्यावरणीय प्रदर्शन हो। त्यहाँ धेरै चुम्बकीय किसानहरू छन् जुन तिनीहरूका मगग खेतहरुका कारण गन्धको कारण बन्द गर्न बाध्य छन्।
2। साना परिणामहरू
अर्को सबैभन्दा ठूलो समस्या फलकको कम उपज हो र निरन्तर उपलब्धताको ग्यारेन्टी छैन।
मगग उत्पादन उत्पादन चक्र को बीएसएफ लार्वा वा अण्डा उपलब्ध गराउन आवश्यक पर्दछ।
समाधान बिटोटगोन जस्ता उपकरणहरू प्रयोग गरेर माछा मार्फत अण्डाको निरन्तर आपूर्तिको रूपमा प्रकृतिबाट बीएसएफ मगग बृहदान्त्रहरू निर्माण गर्ने हो।
बीएसएफ लाई लुकाउन अण्डाहरूले बुककोर्क्स वा फोटोकोपमा बिक्रिको टुक्राको टुक्रा, केलाका पाना वा इन्फ्रा बोर्डको प्रयोग गर्न सक्दछ।
ब्ल्याक सैनिक फ्लाई उष्णकटिबंधीय वा subtropical मौसममा राम्रो तरिकाले राम्रो नस्ल गर्न सक्छ, तर अन्य मौसममा, हरियो हड्डीमा अण्डा प्राप्त गर्न ग्रीनहेउसहरूलाई आवश्यक पर्दछ।
त्यसोभए हामी इन्डोनेशियामा छौं यदि हामी रचनात्मक र थियौं भने, हामी यो समस्याको बारेमा चिन्ता पर्दैन।
3। गलत विकल्प
उडान र चुम्बन को प्रकार को चयन मा गलत। धेरै खेती गरिएका चुम्बनहरू हरी मक्खन हुन्छन्। यो तुरुन्तै निश्चित हुनुपर्छ।
किनकी मक्खनहरू खेती गरिन्छ किनभने कालो सैनिक मक्खनबाट हरी मक्खनहरू हो जुन महामारीहरू बाहिर जान्छ।
बीज खरिद गर्न बाध्य भएमा, परिणामहरू संतोषजनक हुन्छन् ताकि उच्च बीएसएफ मगग्ने बीउ किन्नुहोस्। एक जीवनकाल को लागि श्रेष्ठ चुम्बन को बीउ किन्नुहोस।
यदि तपाईं अनियमिततामा बीउहरू खरीद गर्नुहुन्छ भने परिणामहरू ग्यारेन्टी छैनन् र अन्तमा तपाईंले फेरि खरिद गर्न र फेरि खरीद गर्नुपर्छ।
हामी ब्रूस ली होइनौं
बीएसएफ अण्ड्स किन्न मा बेच्न नसक्नुहोस्। तपाईलाई प्रति ग्राम बेचेको बीएसएफ अण्डहरू जान्न आवश्यक छ कि तपाईंले बिग्रिएको अण्डाहरू किनिरहनुभएको छ किनभने तिनीहरू मूल स्थानबाट "स्क्रैप" छन्।
बीएसएफ अङ्कहरू स्क्रैप भएका छन्। त्यसोभए तपाईंले बिस्तारै अण्डा किन्न सक्नुहुनेछ र हान्नु हुँदैन।
यी अण्डाहरूलाई बेकार ढंगले स्ट्याक गरी पैक गर्दा उल्लेख नभएसम्म बीएसएफको अन्डा तोड्ने परिणामहरू र ह्रास हुँदैन।
बीएसएफ किरोक अण्डाहरूको विक्रेताले पौराणिक ब्रूस ली भन्दा बढी विशेषज्ञ जस्तो देखिन्छ जसले कुनै पनि बिच्छेदको अण्डा छोड्न सक्दछ।
समाधान प्रति "क्लस्टर" को बीएसएफ अण्ड्स किन्नु पर्ने छ जुन अझै पनि अनियमित छ जुन फ्लाई टावरको अनुहार आफ्नो अण्डा राख्छ।
यो सुनिश्चित गर्न को लागी अण्डा बरकरार छ र टूटे भएका छैन ताकि सारा अन्डा टूटा अण्डा को सट्टा खरिद गरिन्छ।
4। गलत सूत्र
के 83% बचत गर्ने लक्ष्यसँग सही फिड अनुप्रयोग हो।
यो प्राप्त गर्न, हामीले जागेको प्रक्रियालाई कसरी प्रशोधित माछा र कुखुरा फिडमा प्रशोधन गर्न को लागी सही सूत्र हो।
5। कन्फिगरेटेड मार्केटिंग Maggot
तपाईं म्यागगट-म्यागागट बेच्न चाहानुहुन्छ जब तपाईंको लागि खानाको आपूर्ति पूरा भएको छ। तपाई मगग बेच्न चाहनुहुन्छ?
यस समस्याको समाधान साँच्चै सजिलो छ, तपाईं भर्खरै माछा वा कुखुराको व्यवसायलाई गुणा गर्न आवश्यक छ।
तर यदि तपाईं निश्चित कारणहरूको कारण हुन सक्नुहुन्न भने, तपाईलाई मगग बेच्न को लागी सोच्न सुरु गर्न चाहानुहुन्छ?
समाधान सजिलो छ, आफ्नो म्याग्वे बेच्नुहोस् Yurie BSF मा, तपाई हाल Maggot प्रति Rp7.000 प्रति किलोग्राम प्राप्त गर्नुहुन्छ।
यो मूल्य बजार भन्दा माथि RP4.000-Rp5.000 प्रति किलोग्राम भन्दा माथिको उच्च छ।
Yurie BSF तपाईंको म्यागजिनको लागि उच्च मूल्यमा खरिद गर्दछ किनभने हामीलाई यो जानवरको खानामा प्रशोधन गर्न र इन्डोनेशियाको 99 शहर भन्दा बढी वितरित गर्न आवश्यक छ।
यदि तपाईं आफ्नो शहरको निकटतम mggot खेतमा अभ्यास गर्न रुचि राख्नुहुन्छ भने, तपाईं यस साइटमा ठेगाना जाँच गर्न सक्नुहुन्छ वा 0812-2105-2808 मा सुश्री Yurie लाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ।
6। विकास हुँदैन
मगगोट व्यवसाय विकासको विकास। स्वाभाविक रूपले, यदि तपाईमा केवल तपाईले केवल जग्गा उत्पादन गर्ने बारे सोच्नु हुन्छ।
सुरुको लागि, यो केवल पशु फिड को लागत कम गर्न को लागी हो। समय बित्छ, तपाईंको दक्षता बढ्नेछ र अधिक से अधिक मगुट फसल पनि खेती गरिनेछ।
केही मानिसहरूका लागि, निश्चित रूपमा विकास जारी राख्न मद्दत चाहिन्छ यसैले युरी बीएसएफ प्रति व्यक्ति RP100.000.000 को सबै Yurie बीएसएफ मित्रहरुलाई सहायता प्रदान गर्न को लागी एक कार्यक्रम संग छ र निश्चित रूप देखि व्यवसाय को आवश्यकताहरु को अनुरूप।
यो रकम प्राप्त गर्न आवश्यक छ कि तपाईलाई सजिलै संग म्याग्वे बेच्न बाध्य छ Yurie BSF। यो दान तपाईंको म्याग्वे-मगग पठाउनको लागि Yurie बीएसएफमा पठाइनु पर्छ।
फिर्ती को रकम सबै भन्दा चासोको विषय होइन। हामी RIBA स्वीकार गर्दैनौँ। हामीले उपलब्ध गराउने सहयोगको मूल्य, कुनै प्रशासनिक कटौतीहरू छैनन्।
त्यसोभए तपाईं म्यागगोटको साथ त्यो मूल्य पनि तिर्न सक्नुहुन्छ।
7। निर्देशित छैन
क्षेत्र पर्यवेक्षक जसले तपाईंको मगग खेतीलाई सफल बनाउँछ। फिल्ड डाइरेक्टरी धेरै महत्त्वपूर्ण छ किनभने तपाईंले रोजगारी गर्नुभएका समस्याहरूले अन्य स्थानहरूमा किसानहरूको समस्यालाई मात्र "समान" गर्दैछन्।
यो जहाँ DUTA YURIE बीएसएफ कार्यक्रम तपाईंको खेतीमा खेल्छ। स्थिति र अवस्था अनुसार प्रत्यक्ष निर्देशन प्रदान गर्नुहोस्।
यो Yurie बीएसएफ राजदूत कार्यक्रम संग, तपाईं कहिल्यै एक्लै हुनेछैन। हामी सफलतापूर्वक प्रशिक्षकको लागि पाठ सिकेर बढी हामी अरूलाई मदत गर्न कृतज्ञ छौं, त्यसपछि सफल हुनु पर्छ।
8। त्यहाँ कुनै ग्यारेन्टी छैन
हामी के मतलब छ कि तपाईले सफलता हासिल गर्ने म्याग्दीको खेती सम्ममा सफलता पाउनु हुन्छ।
हजारौं युनि बस्ने साथीहरूले उनीहरूलाई थाहा पाए पछि 2007 अझै पनि युरै बीएसएफको अधीनमा छन्। कुनै उन्नत एक रसिफ फीज।
के यो हानि छैन?
हां नहीं, हाम्रो सिद्धान्त सफलता संग एक साथ छ। यदि Yurie को सबै भन्दा राम्रो मित्र वास्तव मा सफल छ तब मगग परिणाम Yurie बीएसएफ मा बेचे जाए। यसको अर्थ हामीले एकअर्कालाई चाहिन्छ।
9। संकीर्ण बजार
तपाईं जानवरको खाना कसरी प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ र राष्ट्रिय बजारको अंश बन्न सक्नुहुन्छ? 2019 पशु फिड को आवश्यकता हो 20-21 लाख टन पशु चारा भन्दा बढी। एक धेरै आकर्षक व्यापार अवसर।
इन्डोनेसियाली मगगट सहकारीले इन्डोनेसियाली देशमा गरेको छ, मगग खरीद र बिक्री र अन्य व्यापारिक विकासको लागि आधिकारिक फोरम।
मागेगा र पार्थिव
कुर्म किसानहरूले प्रायः आफ्नो कीड़ेमा लार्वा पाउँछन्। लार्वा जनावर फिडमा "अत्यधिक पोषक" अपशिष्ट बदल्न सर्वोत्तम छन्।
केमहरू उच्च सेलुलोज सामग्री (पेपर, गत्ता, पत्तियां, काठको बाकस सामग्री) लाई बदल्न राम्रो हुन्छन्। धेरै राम्रो माटो संशोधनमा।
अर्थव्यवस्था उडान लार्वा द्वारा उत्पादित अवशिष्टहरूमा राम्रो हुन्छ, तर पनीर तरल पदार्थ एंजाइमहरू छन् र कीड़ेका लागि पनि अम्लीय हुन्छन्।
लारवल गतिविधिले 37 ° C (100 ° F) को वरिपरि तापमान कोयम राख्न सक्छ, जबकि कीड़े कूलर तापमान चाहिन्छ।
एउटै कन्टेरियरमा कीड़ेको साथमा लार्वाको ठूलो संख्या बढाउने प्रयासहरू अधिकांश समय असफल थिए।
कीराहरू कचौरामा बाँच्न सक्दछन् जब तल माटो हुन्छ। कीड़े एक बर्बाद टोकरी मा रहन सक्छ जब एक लार्वा को एक ठूलो संख्या अवस्थित छैन।
लार्वल आबादी कम हुन्छ (जाडोमा) कम हुँदै जान्छ र कीड़े बर्बाद टोकरीमा उठ्न सकिन्छ जब जंगली कालो सेनाको मक्खनबाट अन्डाको प्रतीक्षा गर्न सकिन्छ।
एक फिडको रूपमा, बीएसएफ लार्वा पक्षीको कीराहरूको लागि मध्यवर्ती मेजरको रूपमा चिनिन्छ जुन चराहरू संक्रमित हुन्छ, जबकि रातो कीड़े धेरै जनावरहरूका लागि पाहुनाहरू छन्।
बीएसएफ मगग रोग
पश्चिम अफ्रिकामा, Dirhinus giffardii pupa एच illucens देखि परजीवीय पदार्थ को रूप मा पाइन्छ र अण्डा उत्पादन घट्छ।
कुन परिणामलाई 72% मा भण्डारण गर्ने परिणाम। यी परजीवीहरू लाई टोपीले लगाइरहेछ र तस्करीको आक्रमणबाट लार्वल वृद्धि क्षेत्रको रक्षा गर्न सावधानीपूर्वक उपाय लिनु पर्छ।
त्यहाँ जग्गा खेती गर्ने थुप्रै तरिकाहरू छन्। मगगेट, कचरा र खाँचो जस्ता मगग उत्पादन गर्न विभिन्न मिडिया प्रयोग गर्न सकिन्छ।
कुनै पनि मिडिया प्रयोग गरिएको छ, प्राप्त गर्न सजिलो मिडिया र "लगभग निःशुल्क" छान्नुहोस्।
यो खरिद प्रयोग गरेर मिडिया प्रयोग गरेर सिफारिस गर्न सिफारिश छैन।
ब्रायन मिडिया म्याग्गोटको खेती उत्पादन गरिएको महंगी गुणस्तर चुम्बनको तुलना पनि कम छ। किनभने चोकमा पोषक तत्व सामग्री कम छ।
मगग खेती मीडियाको प्रकार
जग्गे पशुधन ग्यास मिडियाको खेती
खेती गरीएको मिडिया Maggot
पशुधन मागग खेती
मगग खेती गर्ने एक तरिका पशुपालन खाडल प्रयोग गरेर।
कम खर्चमा ठूलो मात्रामा चुम्बन उत्पादन गर्न पशुधन खाडीसँग मागग खेती एक राम्रो तरिका हो।
मगगको खेतीको लागि एक माध्यमको रूपमा के हो पशुधन को खाँचो प्रयोग गर्न सकिन्छ।
सिद्धान्तमा, सबै जनावरहरु को खेती गर्न को लागी मैगगट खेती मीडिया को रूप मा प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसैले त्यहाँ मगग सब्सट्रेट खेती मीडिया किन्न कुनै कारण छैन।
मैगगट खेती मीडियाको लागि खाँचोका उदाहरणहरू
टोफू लुगा मिल को कचरा देखि उत्पन्न मीडिया संग मागग खेती, या हथेली को कचरे अत्यधिक सिफारिश गरिएको छ किनकी राम्रो गुणवत्ता मैग्गोट उत्पादन को अतिरिक्त।
साथै नदीमा फेंकिएको टोफु बर्बादको प्रदूषणको समाधान गर्दै।
त्यसै गरी हथेली तेलको बर्बादको साथ प्रयोग भएको छैन र तेल खाम बिरुवा क्षेत्रमा फसेको छ। यद्यपि तेल ताडको मासु एक म्यागजिन खेती मध्यमको रूपमा धेरै राम्रो छ।
मैग्लट खेती मीडियाको लागि अपशिष्टको उदाहरण
जैविक अपशिष्ट एक वर्तमान पर्यावरणीय समस्या हो, र हरेक ठाँउ पिलिङ्ग हुन्छ। मगग खेतीको लागि एक माध्यम हुन सक्छ।
अपशिष्ट मिडियाको साथ मागग खेती अत्यधिक सिफारिस गरिएको छ किनकी परिणाम राम्रो छन् र अप्ठ्यारोले अपशिष्ट समस्याहरू समाधान गर्न मद्दत गर्दछ।
कचराको समस्या विश्व समस्या हो, न केवल इन्डोनेशियामा।
यो कचराको समस्या समाधान गर्न मद्दत गर्ने यो सानो भागमा हामी निकै ठूलो गर्व हुन्छ।
मगगको खेतीमा कम्तिमा हामी व्युत्पन्न उत्पादनहरू उत्पादन गर्नेछौं
बाकस मगगोट (कासगोट)
चुम्बन र प्रसोधन गरिएको
कासगट्ट (जादुई पूर्व) मगग गुदा उद्घाटनको आकार मगगबाट सानो आकारको (जस्तै रेत) ग्याँस हुन्छ। कासगोट जैविक फिडबाट आउँछ जुन मेगगोट द्वारा खाएको छ र चुम्बकीय रगत को माध्यमबाट फ्याँकिन्छ।
यो प्रक्रिया भनिन्छ vermicomposting। पार्वको गुणस्तरको मर्मत ढाँचामा धेरै निर्भर छ। कास्गोटले कार्बनिक सामग्रीको प्रकारमा निर्भर गर्दैन जुन यसले उपभोग गर्दछ।
कास्गोटले म्याक्रो र माइक्रो पोषक तत्वहरू साथै भिटामिन समावेश गर्दछ। कासगट माटो पोषक तत्वहरू सुधार, फलफूल र फलहरु र पातहरु को उत्पादन को लागि धेरै राम्रो छ।
कास्गोट उर्वरकले इन्सिनमा कार्य गर्दछ जुन खेती जडको विकासलाई प्रोत्साहित गर्न कार्य गर्दछ। र यो किसानहरूको लागि सुसमाचार हो किनभने यो पत्ती र फलफूलको उत्पादनको गुणस्तर सुधार गर्न अझ प्रभावकारी साबित भएको छ।
कास्गोट हाराको तत्वमा अमीर छ
कास्गोट शरीर मेग्गोट वा वरमिकम्पोस्टको चयापचय प्रक्रियाबाट उत्पादन गरिएको माटो प्रजनन को लागी आवश्यक पोषक तत्वहरुमा धेरै अमीर हुन्छ।
कास्गोटले पूर्ण पोषक तत्वहरू (म्याक्रो र माइक्रो रसायन) समावेश गर्दछ। कासगट प्रक्रियामा, यो कार्बनिक पदार्थ को दोहन को प्रक्रिया दुई पल्ट आएको छ।
पहिलो, चुम्बन खाने भन्दा पहिले ब्याक्टीरिया को महत्वपूर्ण प्रक्रिया। दोस्रो, म्याग्गोट आफैले प्रक्रिया, जुन कार्बनिक पदार्थ म्याग्गेट को पेट मा छ जब।
त्यसोभए मेटाबालिक प्रक्रियाहरु मार्फत विष्फोट हुन्छ। यसकारण, मगग बोयो डेग्रेडयोग्य इञ्जिनको रूपमा चिनिन्छ।
कसावाको रासायनिक तत्वहरू पौधे र क्यासावाद्वारा अवशोषित हुन तयार छन् जसमा माइक्रोबस र बिरोध वृद्धि हार्मोन उत्तेजक हुन्छ, त्यसैले तिनीहरू बिरुवा वृद्धिमा छिटो मद्दत गर्न सक्छन्।
क्यास्सामा माइक्रोब्याक्सहरूको ठूलो संख्याले पौष्टिक तत्वहरु को आवश्यक पोषक तत्व को रिहाई को तेज गर्दछ।
N, P, K POC कासगोटको तुलना (Maggot प्रयोग भएको)
1 कास्गा 1,50 4,11 1,22
2 कास्किंग 1,38 4,23 1,22
3 गाई पावर 0,96 0,68 1,68
4 घोडा म्यानुर 0,49 0,73 0,83
5 चिकन खाई 2,72 6,32 2,03
6 बतख छोड्ने 0,84 1,81 0,42
7 बकरी म्यानुर 0,61 0,31 0,18
8 सुँगुर खाई 1,24 1,83 0,74
कास्गाट कार्बनिक उर्वरक सामग्री
मगगको पोषक तत्व सामग्री म्याग्गोटमा दिइएको फिड स्रोतमा निर्भर छ।
अधिक विविध फिड, केसगोट मा पोषण तत्व अधिक विविध। तर सामान्यतया केसगोटको पोषक तत्व सामग्री निम्नानुसार छ:
नाइट्रोजन (एन) 0,63%
फास्फोरस (पी) 0,35%
पोटेशियम (के) 0,20%
क्याल्सियम (Ca) 0,23%
म्याग्नेशियम (एमजी) 0,26%
सोडियम (ना) 0,07%
कपर (Cu) 17,58%
जिंक (Zn) 0,007%
मंगनीम (एमएन) 0,003%
आयरन (फाई) 0,79%
बोरोन (बी) 0,21%
Molybdenum (एमओ) 14,48%
टीके 35,80 मेग / 100mg
41,23% र जल बचत क्षमता
13,88% हास्य एसिड
कासगार्ट उर्वरकको फाइदा
यो सस्तो छ किनकि केसगट खर्ब गर्ने सामग्रीहरू हाम्रो वरपर हुन् कार्बनिक अवयव हुन्।
कश्मीरी उर्वरकले माटोलाई क्षति पुर्याउँदैन किनकि यो रसायनहरु भन्दा मुक्त छ। यसले कसावा उर्वरकलाई निरन्तर रूपमा प्रयोग गर्न सक्छ र मिट्टी वा बिरुवाहरूको लागि नकारात्मक साइड इफेक्टहरू गर्दैन।
कास्गोट उर्वरक हानि
बिरुवाहरु को प्रभावकारिता अकार्बनिक उर्वरक को रूप मा तेजी देखि नहीं है। किनकी कसावा उर्वरक प्राकृतिक रूपमा बनाइन्छ।
सजावटी बिरुवाहरु, सब्जहरु र फलहरु को लागी वनस्पति र जनगणना बिरुवा को विकास मा मदद गर्दछ। बढी विदेशी हुन बिरुवाहरु को रूप मा सुधार मा मदद गर्दछ।
फूल रङ्ग, बनावट र मुद्रा राम्रो छ। कास्गाट नर्सरीमा बढ्दो मिडियाको मिश्रणको रूपमा धेरै राम्रो छ।
माटोको भौतिक, रासायनिक र जैविक गुणहरू सुधार गर्न हार्मोन समावेश गर्दछ। लामो समयमा प्रयोग गर्न सुरक्षित किनभने किनकि कुनै रसायनहरू।
कासगार्ट उर्वरकहरूको प्रयोगको लागि डोजज
केसका लागि कासगाट उर्वरक 1kg कासावा 3kG माटोसँग मिलाइयो, जबकि ठूलो भूमिको लागि 6-10 किल कसावा प्रत्येक 10X2
कसावाको आकार पौधेको प्रकार र मार्क्सको उर्वरताको स्तरमा निर्भर हुन्छ।
तरल मैगगोट कार्बनिक उर्वरक
मगगोल तरल जैविक उर्वरक (पीओसी) को लाभ यो छ कि यसमा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम र पानीको सामग्री छ, विकास उत्तेजनाहरु र विभिन्न संयंत्रका दुरीहरू रोक्न सक्दछ।
तरल जैविक उर्वरको स्वभाव र विशेषताहरू
Maggot तरल जैविक उर्वरक हुनु पर्छ। किनभने क्यासगट मिडियामा लामो समयसम्म भण्डारण हुनेछ, ठोस क्यासगट प्रयोग गर्नुहोस्।
जबकि तरल मैगगोट जैविक उर्वरक को पोषण पानी को कटाव को लागि अधिक संवेदनशीलता र evaporates छ।
तर त्यहाँ विभिन्न फाईदाहरू छन् जब पीओसी चुम्बन प्रयोग गर्दछ जुन पत्ते र फल पौधाहरूद्वारा पाचन गर्न सजिलो छ र फल र बीउ विकासको लागि उत्तेजनाको रूपमा कार्य गर्दछ।
खासगरी जब पत्तियां र फल को उत्तेजित गर्न को लागी शुरू हुन्छ। Maggot POC राम्रो छ किनकी यो सिधै स्टमटा वा pores को माध्यम ले अवशोषित हुन सक्छ।
पीओसी मैगगोट दिने खानेकुरामा ध्यान दिनैपर्छ ताकि अनावश्यक रूपमा नपढ्नु र बिरुवामा मृत्युको कारण हो।
औसत मा संयंत्रहरूले पोषक तत्वहरूलाई प्रति दिन 2% भन्दा बढी अवशोषित गर्न सक्छ।
POC मैगगोटको प्रयोगको लागि डोजज
शुद्ध पानीको साथ POC जोड्नुहोस्। नयाँ पानी स्प्रे मिश्रण पछि, एकाग्रता 2% भन्दा बढी छैन वा PN Maggot को 1 लीटर पानीको प्रत्येक 100 लीटरको लागि।
वनस्पतिबाट उत्पत्तिबाट चरण परिवर्तनहरूमा स्प्रे, फल, बीउ वा tubers उत्पादन गर्दछ।
सुक्ने सिजनको समयमा हप्तामा एक चोटि पीओसी चुम्बन को व्यवस्थापन। जब सिजन सुरु हुन्छ, हरेक3स्प्रे एक दिनमा स्प्रे गर्नुहोस् किनभने पीओसी बारम्बार पानीले बर्बाद हुन्छ।
POC चुम्बनको खुट्टा POC चुम्बन दिइने रोपको प्रकारमा समायोजन हुनुपर्छ।
म्याग्गोट प्रसोधन गर्दै
प्राइपपापी वा मेगगट लार्वाको उपजमा उपप्रथम सबैलाई विभिन्न तयारीमा प्रशोधन गरिनुपर्छ।
यो उपज अधिकतम गर्न थप लामो समयको लागि भण्डारण गर्न सकिन्छ। र आवश्यक भएमा प्रयोग गरियो।
Maggot पशु फिड
केग मेगगोट जनावरको खानाको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ? मगगटमा एक पोषक तत्व मध्ये एक प्रोटीन हो,
र यो प्रोटीन सबै जनावरहरू र मानवहरू पनि आवश्यक छ। त्यसैले कुन जनावरहरू मगगोट गर्न सकिन्छ। जवाफ सबै जनावरहरू हो जुन पशु प्रोटीन चाहिन्छ।
यो केवल कि प्रत्येक पशु द्वारा आवश्यक प्रोटीन को स्तर फरक छ। त्यसैले समाधानले मगगटलाई विभिन्न तयारीमा पहिला प्रसोधन गर्ने छ।
पशुधन को आवश्यकताहरु को अनुसार प्रोटीन को स्तर विनियमित गरिन्छ।
म्यागागट पक्षी फिडको लागि राम्रो छ
Anis Kembang बर्ड
Anis Merah बर्ड
बर्ड ककक दाद
पक्षी चिरपिंग ककक स्वाम्प
बर्ड Chirping स्टार्लिंग सर्न
मुरा बूट बर्ड
बुरुङ पान्का वार्न
मैगगोट बैंकको चिकन फिडको लागि राम्रो छ
विजू चिकन वा जालक
सजावटी चिकन पशु फिडको लागि मगग राम्रो
हरित वन चिकन
ग्रे वन वनस्पति
रातो वनस्पति चिकन
श्रीलंका वन वनस्पति
कपास चिकन (सिल्क हेन)
नग्न गली चिकन
प्लाईमाउथ रक चिकन
पोलिश चिकेन वा पोल्याण्ड
रन्डाह बूट चिकन
Kampung चिकन पशु फिडको लागि माग्गा राम्रो
दान जान्टन कुखुरा
ब्रोलर पशु फिडका लागि राम्रो मैगगोट
चिकन ब्राउन लेघर्न
चिकेन कोर्निश क्रस
मिस्र फयौमी चिकन
चिकेन स्वतन्त्रता रेंजर्स
भान्सा जर्सी चिकन
चिकन टर्की (नग्न नरिवल)
मागग ले तह चिकन फिडको लागि राम्रो छ
चिकेन बुफ ओर्पिंगटन
चिकेन प्लिमाउथ रक / ब्रेड रक
रोड आइल्याण्ड रेड चिकन
क्याफफिश फिडिंगको लागि मैग्लट राम्रो
डुम्बो कैटफिश पशुधन
पर्ल कैटफिश पशुधन
Sangkuriang कैटफिश पशुधन
Maggot tilapia फीड को लागि राम्रो छ
कालो तिलापिया 69
कोर्क को फीड को लागि राम्रो मैगगोट
कर्क चन्ना बार्का
कोर्क चन्ना ब्लेरी
कर्क चन्ना डिपलोरमा
कर्क चाना माइक्रोप्रोल्टेस
कर्क चन्ना टुरुरो
बतख पशु फिडको लागि मगग राम्रो
Magelang स्थानीय बतख मवेशी
Tegal स्थानीय बतख मवेशी
Albino बतख मवेशी
Tiktok बतख मवेशी
Mojosari महिला बतख गायक
Buff बतख बतख मवेशी
Cirebon बतख या रम्बन
भारतीय धावक बतख
खाकी चम्पाबेल बतख मवेशी
रेटाइल पशु फिडको लागि मगग राम्रो
अङ्गाना पशु फिडको लागि मैगट राम्रो
कोई जानवर फिडको लागि मगग राम्रो
अभ्यास गर्न जान्न चाहनुहुन्छ
रांचै मा प्रत्यक्ष?
Ranch of 99 स्थान जाँच गर्नुहोस्
Yurie BSF समुदाय
अहिले सामेल हुनुहोस्!